August 2014 | ပြည်သတင်း
အသားအရေအတွက် ရေများများ သောက်ပေးပါ နှင့် ဝမ်းချုပ်တတ်သူများ အတွက် သတင်းကောင်း
အမျိုးသား အမျိုးသမီး မည်သူမဆို လိုက်နာဆောင်ရွက် သင့်ပါတယ်။
သင့်တဲ့ နည်းလမ်းလေး ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) အဆီပြန်မူကို နည်းပါးလာခြင်း
ညအိပ်ယာ ဝင်ခါနီး အချိန်မှာ ရေသောက်မယ် ဆိုရင် မနက်အိပ်ယာထ အဆီပြန်မူကို နည်းပါးသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေသောက်ခြင်းဟာ အသားအရေကို သိသိသာသာ စိုပြည်စေရုံသာ မကဘဲ ဝက်ခြံဖြစ်ပွား မူကိုပါ လျော့ကျစေမှာ မလွဲပါဘူး။
(၃) မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို သက်သာစေခြင်း
အိပ်ရေးပျက်လို့ မျက်ကွင်း ညိုတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရောဂါကြောင့် မျက်ကွင်းညိုတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရေများများ သောက်ပေးခြင်းက သက်သာစေ ပါတယ်။
(၄) မွဲခြောက်သော အသားအရေကို စိုပြည်လာစေခြင်း
ရေကို များများသောက်ပေးခြင်းဟာ သိသိသာသာ အသားအရည်ကို စိုပြည်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်းချုပ်တတ် သူတွေ အတွက် သဘာဝ၏ ဆေးကောင်း
တစ်လက်ဖြစ် မိတ်ဆက် ပေးလိုက် ပါရစေ။
အဲဒါကတော့ ဟင်းနုနယ်ကို ၅ မိနစ်လောက် ရေနွေးစိမ် လိုက်ပါ။
ထိုရေနွေး စိမ်ပြီးသား ဟင်းနုနယ်ကို ဆီအနည်းငယ် ထည့်ပြီး
သုပ်စားဖြင်း အားဖြင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာပေစိစစ်ရေးတင်းကြပ်နေသော ကာလများဖြစ်၍မကြေနပ်ချက်များကိုဒိထက်ပို၍ရေးရန်အခွင်.မသာခဲ.ပေ ထိုသီချင်းသည် အနုပညာသမားတို.၏နှလုံးအိမ်ဝယ်စွဲမြဲစွာခိုဝင်နေခဲ.ကြသည် ။ တကယ်တော.ဤသီချင်းသည်အာဏာရှင်ဆန်.ကျင်ရေးသီချင်းဖြစ်ပါသည်။နှစ်များစွာကြာပြီးနောက်ထိုသီချင်းကို အဆိုတော် ဂျေမောင်မောင်က The Shell မတိုင်မီကာလတွင်စတင်သီဆိုခဲ.ပါသည် ။ထို.နောက်ခိုင်ထူးက သူ၏အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ.သော “ အဉ္ဖလီ “ တေးစီးရီးတွင် သီဆိုအောင်မြင်ခဲ.ပါ၏ ။ထို.နောက် ခင်ဝမ်း က “ပန်းခရမ်းပြာ” စီးရီးတွင်ထပ်မံသီဆိုခဲ.သည် ။ ခင်ဝမ်းသီဆိုအသံသွင်းစဉ် ကိုနေ၀င်းက Classic Guitar တီးခတ်ပြီး ကူညီသီဆိုပေးခဲ.ပါသည် ။ ရင်ထဲမှာမကြေနပ်ဆုံး………အသည်းမှာဒါနောက်ဆုံးသည် မြန်မာတပြည်လုံးကိုပျံ.နှံ.ခဲ.ပါသည် ။ ဤသီချင်းသည် လေးလေးနက်နက်မတွေးပဲအပေါ်ယံနားထောင်လျင်လဲကောင်းသည် ။နောက်ကွယ်ကသမိုင်းဖြစ်ရပ်များနှင်.ဆက်စပ်ခံစားလျင်မူကားအတိုင်းထက်အလွန်ကောင်းနေပေသည် ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖခင်ကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကိုအောက်မေ.သတိရရုံဖြင်.ကျောင်းသားများကိုဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ. သောအာဏာရှင်ကြီးဦးနေ၀င်းသည် သူကြောက်ခဲ.သော ကျောင်းသားပြည်သူတို.၏တခဲနက်ဆန်.ကျင်မှုဖြင်.ပင် ၁၉၈၈ တွင်ရာထူးမှပြုတ်ကျခဲ.သည် ။ ၀င်းမင်းထွေးသည်ရှိနေဆဲ ၊ကိုရဲလွင်သည် ရှိနေဆဲ ၊ တေးရေးကိုနေ၀င်းသည်ရှိနေဆဲ၊ကျောင်းသားတို.သည်ရှိနေဆဲ ၊မျိုးဆက်သစ်တို.သည်ရှိနေဆဲ ။ နောက်ဆုံးတစ်နေ.တွင်အာဏာရှင် သာကျဆုံးရပေမည် ။
ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုတို့နှင့် ချိုသာသောဈေးနူန်းတို့ဖြင့် စေတနာအရင်းခံဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ Luck Asia..အဆင့်မြင့်အအေးခန်း....ဧည့်ရိပ်သာ
ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုတို့နှင့် ချိုသာသောဈေးနူန်းတို့ဖြင့် စေတနာအရင်းခံဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
၁။ Wifi Free နှင့် မြန်မာအစားအစာ/တရုတ်အစား
၂။ လုံခြုံစိတ်ချရသော ကားပါကင်ရှိခြင်း။
၃။ မိသားစုများ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းစွာ
၄။ Room Facilities (၀န်ဆောင်မှု)
-TV (6) Chanals
-ln roon mini bar
-lnternet,Free Wireless lnternet
-large car parking area....
Luck Asia..အဆင့်မြင့်အအေးခန်း....ဧည့်ရိပ်သာ အောင်ဆန်း အပိုင်း(၃)၊(၁၁)လမ်း၊ပြည်သာယာရပ်
ကွက်၊ပြည်မြို့။ Ph, 053-27 438 / 09,31592448 ..............
အိမ်ရှင်မများအတွက် ဒိုင်းမွန်းစတား အမှုန့်ကြိတ်စက်နှင့် အမှုန့်မျိုးစုံ
ဒိုင်းမွန်းစတား အမှုန့်ကြိတ်စက်မှ အိမ်ရှင်မများအတွက် ချိုသာသောဈေးနှုန်း၊ စစ်မှန်သော အရည်အသွေးများဖြင့် စနစ်တကျထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ပဲကျက်မှုန့်၊ ပဲစိမ်းမှုန့်၊ ငရုတ်အစိမ်းကြမ်းမှုန့်၊ ငရုတ်အလှော်မှုန့်၊ အရောင်တင်မှုန့်၊ နနွင်းမှုန့်၊ ဆန်လှော်မှုန့်၊ ကုလားပဲခွဲခြမ်းကြီးနှင့် ကုလားပဲကြော်၊ အိမ်ရှင်မများအတွက် အကောင်းစား (ဆေးမဆိုး၊ ဆားမရော၊ အညှာချွေ) ငရုပ်မှုန့် စစ်စစ်၊ တိုဟူးကြိုသူများနှင့် တိုဟူးကြော်သမားများအတွက် ပဲစိမ်းမှုန့် (၁၀၀%) အပြည့် အထူးအာမခံဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါသည်။
ဒိုင်းမွန်းစတားမှဝန်ဆောင်မှု - နယ် (သို့မဟုတ်) မြို့များမှ မှာယူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို အိမ် (သို့) ဆိုင်အရောက် ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝဖြင့် အရောက်ပို့ပေးပါသည်။
အထူးအစီအစဉ် - ဝယ်ယူအားပေးကြသော မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ်များကို ကျပ်သုံးသောင်း (၃၀၀၀၀ိ/) အထက် ဝယ်ယူသူတိုင်းကို အမှတ်တရလက်ဆောင်များ ပေးနေပါပြီ။ ဈေးဝယ်ရင်း လက်ဆောင်များ ရယူကြပါစို့။
ဖြန့်ချီရေး - စန္ဒာဝင်း ကုန်စုံဆိုင် (၅) ရုံ (၆) ရုံကြား၊ မြို့မဈေးကြီး၊ ပြည်မြို့။
ဖုန်း - ၀၉ ၅၃၆၀၄၆၄
လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကြော်ငြာထည့်သွင်းလိုပါက ၀၉ ၄၃၀ ၄၇၈၆၂ ၊ ၀၉ ၄၁၀ ၆၁၆ ၃၂၃ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂၀၀၈ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း (၁၅) ပုဒ်မ ၄၅၀ တွင် မြန်မာစာသည်ရုံးသုံးစာဖြစ်သည်ဟု တရားဝင်ဖော်ပြပါရှိပေသည် ။ ထို.ကြောင်.လည်းဤစာကိုရေးဖြစ်ပေသည် ။ ယနေ.ခေတ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဝယ်မော်တော်ယာဉ်များယခင်ကနှင်. မကြုံဖူးအောင် များပြားလာပါသည် ။. မော်တော်ကားများသည်မြန်မာပြည်သို.၀င်လာမစဲတသဲသဲဖြစ်နေပါသည် ။ ဤသည်ကိုဝမ်းမြောက်ပါသည် ။ကိုယ်.နိုင်ငံသားတို. ကားစီးနိုင် ခြင်းကိုအပြစ်ပြောစရာတစ်ကွက်မှမရှိပါပေ ။
သို.သော်ကျွန်တော်ဝမ်းမမြောက်နိုင်သည်ကား အထက်ကဖော်ပြခဲ.သကဲ.သို.မြန်မာစာ နှင်.ပါတ်သက်၏ ။ ယခင်ခေတ်အဆက်ဆက်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ မည်သည်.စက်တပ်ယာဉ်မဆို လိုင်စင်နံပါတ်ပြား များကို မြင်သာသောနေရာများးတွင် မြန်မာဘာသာ အက္ခရာ ၊ ဂဏန်းများဖြင်. ရေးသားဖော်ပြကြရသည် ။မိမိကားကိုမိမိဘာသာ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ များ ၊ ဂဏန်းများဖြင်.ဘာသာပြန်ပြီးတပ်၍မရ ။ မြန်မာ.ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်မှာရော ၊ န.၀.တ ၊ န.မ.ဖ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာရော ထိုစနစ်သည်ခိုင်မြဲခဲ.ပါသည် ။ မြန်မာစာ သည် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားးအားလုံးအတွက် ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်သည် ။ ၁၂၃၄၅၆ စသော ဂဏန်းများကို ကရင်ရော ၊ကချင်ရော ၊ ဓနုရော ၊တောင်ရိုးရော ၊ အင်းသားရော ၊ပလောင်ရော ၊ ဂျိမ်းဖောရော ၊မွန်ရော၊ ရခိုင်ရော ကယားရော ၊ပဒေါင်ရောကောင်းစွာဖတ်တတ်သည် ။ ဒ/၃၉၉၂ ဆိုလျင် လူတိုင်းသိနိုင်သည် ။ မြန်မာအားလုံးဖတ်တတ်သည် ။ ကိုယ်.ကိုကားတိုက်သွားလျင် စာရေးတတ်ဖတ်တတ်အဆင်.ရှိသော တောသူတောင်သားတစ်ယောက်ပင်လျင် ကားနံပါတ်ကိုအလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်သည် ။
ယခုမခါမဟုတ်သည်.နေရာတွင်ဘိုဆန်ချင်လွန်းသောအလေ.အထဆန်းတစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ခေတ်စားနေ၏ ။ အစသော် နိုင်ငံခြားသားကမ္ဘာလှည်.ခရီးသည်များ မိမိငှားစီးသော တက္ကစီနံပါတ်ကိုမှတ်မိရန်ဟုဟုဆိုကာ ရန်ကုန်မြို.တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက အငှားယာဉ်အားလုံးတွင် City Taxi ဟု အမည်ရေးထိုးစေပြီး အရှေ.ပိုင်းခရိုင်ဆိုလျင် E အက္ခရာဖြင်.စသော ၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ဆိုလျင် W အက္ခရာဖြင်.စသော အင်္ဂလိပ် ဂဏန်းများကို ကားကိုယ်ထည်ပေါ်တွင် မှုတ်ဆေးဖြင်.ရေးသွင်းပေးခဲ.သည် ။ ထိုအခါတက္ကစီတိုင်းတွင် မူလမြန်မာ အက္ခရာဖြင်. လိုင်စင်ပြားများအပြင် ကားဘော်ဒီ၌ E . 31984 စသည်ဖြင်. ဂဏန်းများပေါ်ပေါက်လာ၏ ။ ဤမျှအထိမဆိုးသေး ။မြန်မာ အက္ခရာ ၊မြန်မာစာ ၊မြန်မာဂဏန်းသည် ကားရှေ.နှင်.နောက်လိုင်စင်ပြားပေါ်တွင်ထင်ရှားစွာရှိနေသေးသည် ။ သို.သော် ဒီမိုကရေစီအစိုးရဟုခေါ်သော သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တွင် မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးသောဌာနသည် မယောင်ရာဆီလူးလာတာတွေ.ရ၏ ။ သမ္မတရွေးပွဲ ၊ လွှတ်တော်ဖွဲ.စည်းပုံ ၊ ဖက်ဒရယ်စနစ် ၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်.၊အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ၊အရပ်သားအစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်ဝယ်တပ်မတော်ကရှိနေသောစနစ် စသည်များတွင်အမေရိကန်ကို ယှဉ်နိုင်ရန်မကြိုးစားသော်လည်း မော်တော်ကားလိုင်စင်နံပါတ်တပ်သောကိစ္စတွင်မူ အမေရိက၌ ပြည်နယ်နံမည်အတိုကောက်ကိုရှေ.မှထားကာ နောက်မှအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်. ဂဏန်းထိုးသောအလေ.အထကိုအမေကျော်ဒွေးတော်လွန်းသည်.သဖွယ်စတင်ကျင်.သုံးလာ၏ ။ထို.ကြောင်.ယနေ.မြန်မာနိုင်ငံ၏လမ်းမျာပေါ်ဝယ် YGN /စသောနံပါတ်တပ်ကားများ ၊ YGN 8F /3922 စသည်.နံပါတ်များ AA 3611 စသောနံပါတ်များကိုတွေ.လာရ၏ ။ မြန်မာသည်မြန်မာမဟုတ်တော.သလိုဖြစ်လာ၏ ။ မြန်မာနိုင်ငံသို.ရောက်လာသော တိုးရစ်များနှင်.သံတမန်များအဆင်ပြေအောင် နိုင်ငံတကာ ဘာသာတစ်ခုကိုပြောင်းလဲလိုက်နိုင်သည်ဆိုပြီးသက်ဆိုင်ရာကဂုဏ်ယူချင်ယူနေပါမည် ။ကျွန်တော်ကတော. ထိုအင်္ဂလိပ်အက္ခရာများကိုတွေ.တိုင်း ရှက်မိသည် ။ရှေးမြန်မာများကိုမျက်နှာပူမိသည် ။အနည်းဆုံးတော. သီပေါမင်းတရား၏မြေးတော်သူ တော်ဘုရားကလေး(အောင်ဇေ ) ကိုအားနာနေမိသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးကာစတွင်အင်္ဂလိပ်တို.ထံမှအမွေဆက်ခံရရှိခဲ.သည်.အထဲတွင်မော်တော်ယာဉ်စ နစ်လဲပါပါသည်။တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ထိုစဉ်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်.စက်တပ်ယာဉ်အားလုံးလိုင်စင်နံပါတ်များအသုးံ ပြုခြင်းဖြစ်သည် ။ဥပမာအားဖြင်.ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစီးသောကားအမှတ်မှာ RA / 2874 ဖြစ်ပြီး အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များကိုလုပ်ကြံသည်.နေ.ကဂဠုန်ဦးစော၏တပည်.များစီးသောကားနံပါတ်(အတု) မှာ R.C /1814 ဖြစ်သည် ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးသော်လည်းထိုစနစ်ကိုပင်ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ.သည် ။သို.သော် ၎င်းကိစ္စကိုရဲရဲတောက်တကိုယ်တော်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ.သူမှာသီပေါမင်း၏မြေးတော်ဖြစ်သောတော်ဘုရားကလေး(အောင်ဇေ) ဖြစ်သည် ။ သူကသူ.ကိုယ်ပိုင်ကားတွင် လိုင်စင်နံပါတ် RD .1055 ကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာများ အသုံးမပြု မြန်မာတို.သည် ကိုယ်.မင်းကိုယ်.ချင်း ၊ကိုယ်.စာပေ ၊ကိုယ်.ယဉ်ကျေးမှုနှင်.လွတ်လပ်သောလူမျိုးဖြစ်ကြောင်းပြသသည်.အနေဖြင်. မြန်မာလို အာရ်ဒီ-၁၀၅၅ ဟုရေးသည် ။ ထိုသို.မြန်မာ လိုင်စင်နံပါတ်အသုံးပြုခြင်းကို ရဲကစစ်ဆေးပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက တော်ဘုရားကလေး(အောင်ဇေ)အား စာပို.၍ထုချေလွှာတောင်းသည် ။ထိုအခါတော်ဘုရားကလေးက ဤသို.အကြောင်းပြန်လိုက်ပေ၏ ။
“ မိမိသည်မြန်မာမင်းသားဖြစ်၍ မိမိပိုင်မော်တော်ယာဉ်၏နံပါတ်အား မြန်မာလိုရေးခြင်းသည်သဘာဝကျသည်ဟုယုံကြည်ပါသည် ။ထိုကဲ.သို.မြန်မာလိုရေးရာမှာ “ အာရ်ဒီ “ သည်မြန်မာစာလုံးများမဟုတ်မူပဲ အင်္ဂလိပ်စာလုံးများ အတိုင်း မြန်မာလို အသံထွက်ရေးရခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ.ဆန်.ကျင်ရေးကာလတွင် မြန်မာစာသည်တို.စာဟုကြွေးကြော်ခဲ.ကြသော်လည်း ယခုလွတ်လပ်ရေးကြေငြာပြီးသည်.ကာလတွင်အသုံးဝင်လှသောမော်တော်ယဉ်အားလုံးတွင်အင်္ဂလိပ်စာလုံးများသုံးစွဲနေရသည်မှာအမြင်မတော်ဆင်တော်နှင်.ခလောက်ကဲ.သို.ဖြစ်နေပါသည် ။ အထက်ဖော်ပြပါမှန်ကန်သည်.အချက်များကြောင်.မြန်မာနိုင်ငံရှိမော်တော်ယာဉ်အားလုံးတွင်မြန်မာနံပါတ်များသာရေးသင်.ကြောင်း အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ဖြင်.အပြုသဘောထားကာရှင်းလင်းတင်ပြ(ထုချေ)အပ်ပါသည် “
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးထိုအမှုကိုကျကျနနသေသေချာချာစစ်ဆေးပြီးသောအခါ တော်ဘုရားလေးအောင်ဇေ၏ ထုချေရှင်းလင်းချက်မှာအကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံနေသဖြင်. ထိုအချိန်၁၉၅၃ မှစကာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်တပ်ယာဉ်မှန်သမျှ၏လိုင်စင်နံပါတ်ပြားများကို မြန်မာဘာသာဖြင်.ပင် အသုံးပြုရမည်ဟု အမိန်.ထုတ်ပြန်ခဲ.ပေသည် ။ ထိုအကြောင်းကိုတော်ဘုရားကလေး(အောင်ဇေ)က သူ၏ “ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင်. “ ဟူသောစာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည် ။
အတိတ်ကမျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များတိုက်ယူခဲ.ရသော မြန်မာဘာသာစကား၏နေရာတစ်ခုသည် ကျွန်တော်တို.ခေတ်ရောက်ကာမှ နိုင်ငံတကာလိုလို ၊ ကမ္ဘာ.အဆင်.မီလိုလို (တခြားဘာမှကမ္ဘာ.အဆင်.မမီသဖြင်. လွယ်ရာကိုလိုက်၍ မီခြင်း ) လုပ်၍ ဖွဲ.စည်းပုံတွင်ပါသော ပြဌာန်းချက် ပုဒ်မ (၄၅၀)ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆန်.ကျင်နေကြခြင်းဖြစ်သည် ။ အကယ်၍ ကားတစ်စီးသည် ခေတ်ပညာမတတ်သော တောဘက်မှ အဖွားကြီးတယောက်ကို တိုက်မိပြီးမောင်းပြေးသွားသည်ဆိုပါစို. ။ တောဘက်တွင်နေထိုင်သော မြန်မာအဘွားကြီး (သို.မဟုတ် )ရှမ်းအဘွားကြီးတစ်ယောက်သည် 3F / တို. YGN တို. MDY တို.ကိုဖတ်တတ်ပါမည်လား ။ မဖတ်တတ်လျင်ကိုယ်.ကိုတိုက်သွားသောကားနံပါတ်ကိုပင် ကိုယ်.နိုင်ငံဖြစ်ပါလျက် မဖတ်တတ်သော စာလုံးများကိုဘာ.ကြောင်.ရေးသားရသနည်း ။ နိုင်ငံခြားသားများအဆင်ပြေစေရန်ဟုဆင်ခြေပေးပြန်လျင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင် ခနလာသော တိုးရစ်မှာ နယ်စပ်မှခန၀င်လာသော တိုးရစ်များပါထည်.ပေါင်းမှ တစ်နှစ်လုံး သုံးသန်းခန်.ရှိသည်ဟုဆိုရာ ထိုလူသုံးသန်း၏အရေးကိုကြည်.မည်လား မြန်မာနိုင်ငံသား သန်း(၆၀)၏အရေးကိုကြည်.မည်လားဟုမေးစရာရှိပေသည် ။ တစ်ဖန်တိုးရစ်များသည် ကိုယ်စီးသောကားနံပါတ်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်၍ မှတ်တတ်သော အလေ.အထလည်းရှိသည်ဖြစ်ရာ အရေးအကြောင်းပေါ်ပါက ထိုဓါတ်ပုံကို ရဲအားပြခြင်းဖြင်.ခြေရာခံနိုင်သည်သာဖြစ်သည် ။အင်္ဂလိပ်ဂဏန်းရေးထားမှမဟုတ်ပေ ။
ယခုအခါမြန်မာတစ်ပြည်လုံးသည် ဘိုဆန်ခြင်းကို အလိုရှိကြပေကုန်၏ ။ မြန်မာဘာသာဖြင်.ထုတ်ဝေသောဂျာနယ် ၊မဂ္ဂဇင်းများ၏အမည်မှာ မြန်မာဘာသာပင်မပါတော.ပဲ အင်္ဂလိပ်နာမည်အစစ်များကိုသာပေးလာကြပေတော.၏ ။ နာမည်နှင်.မျက်နှာဖုံးကိုသာကြည်.လျင် ယူကေမှလာသောမဂ္ဂဇင်းလိုလို ၊ အော်စတြေးလျမှလာသော ဂျာနယ်လိုလို ၊ စကာင်္ပူမှ သတင်းစာလိုလို တွေဖြစ်နေကြ၏ ။အထဲလှန်ကြည်.၍ မြန်မာစာတွေတွေ.မှ အော်ဒါမြန်မာပြည်ကဂျာနယ်တွေ၊သတင်းစာတွေ ၊မဂ္ဂဇင်းတွေပဲဟုသိကြရသည် အထိမြန်မာနည်မည်များခေါင်းပါးလာသောခေတ်ဖြစ်သည် ။ တစ်ဖန်မြန်မာတွေဖတ်သော မြန်မာဂျာနယ်ဖြစ်ပါလျက် ကြော်ငြာအချို.သည်မြန်မာစာတစ်လုံးမှမပါပဲ အင်္ဂလိပ်လိုမျက်နာပြည်. (သို.မဟုတ် )မျက်နှာဝက် ရေးသားထားတာလည်းတွေ.ရပေသည် ။ ထိုမျှဘိုဆန်ချင်လျင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်.ထုတ်ဝေသော New Light of Myanmar တို. Myanmar Times တို.တွင်ဘာကြောင်.အင်္ဂလိပ်လိုမကြော်ငြာပဲ မြန်မာဂျာနယ်တွင်ဘိုလိုကြေငြာသလဲဟု တွေးမိပေသည် ။အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်သော မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်များကိုစော်ကားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည် ။ တစ်ခါတလေ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းကြော်ငြာများကိုပင် အစိုးရထုတ်သတင်းစာများ၌ အင်္ဂလိပ်လို မျက်နှာပြည်.ကြော်ငြာထည်.ကြရာ တခါတရံ၌ CONGRATULATIONS ဆိုသောစာလုံးကိုပင် မှန်ကန်အောင်စာလုံးမပေါင်းနိုင်ပဲ ( S ) ပြုတ်ကျန်နေတာတွေ မကြာခနတွေ.ရသည် ။ ကားမောင်းသင်တန်းတစ်ခုကလည်း All adults must be able to drive ဆိုသော စာကြောင်းကိုမှန်ကန်စွာမရေးတတ်ပဲ ရှေ.နောက်တွေလွဲကာ နေ.စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလို တလွဲတွေရေး၍ ကြေငြာနေတာလည်း မြန်မာ.အလင်းသတင်းစာမှာမကြာခနဖတ်ရသည် ။ မြန်မာတွေ သိပ်ပြီးဘိုဆန်ချင်ပုံမှာ ပုပ္ဖါးတောင်ကလပ်သို.တက်သောလမ်းမှာပင်မလွတ် ။ ဓါတ်နန်း ဆိုသော စာလုံးကို အင်္ဂလိပ်လို ( DAT NAN ) ဟုခပ်တည်တည်ေ၇းထား၏ ။ နတ်နန်းဆိုသောစာလုံးကိုမူ ( NAT NAN ) ဟုတ၇ားဝင်စာချိတ်ဆွဲထားပါသည် ။ အဘယ်.ကြောင်. အင်္ဂလိပ် အမေရိကန်ပင်နားမလည်သောအင်္ဂလိပ်စာများကို တောင်မရောက်မြောက်မရောက်ရေးသားနေကြလေသနည်းဆိုတာတွေးလို.မရပေ ။ မြန်မာတို.သည်မြန်မာအမည်ပေး၍ရပါလျက်အင်္ဂလိပ်စာလုံးသုံးလိုက်ရပြီးရော အဓိပါယ်သေသေချာချာနားမလည်ပဲဆိုင်နာမည်များအသုံးပြုနေကြသည်လဲရှိသည် ။နားလည်သူများကြည်.လျင်ရယ်စရာများဖြစ်နေပေသည် ။ အလှပြင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သည် သူ၏ဆိုင်နာမည်ကို ( FACE OFF ) ဟုပေးထား၏ ။ နီကိုလပ်ကေ.ဂ်ျနှင်. ဂျွန်ထ၇ာဗိုလ်တာတို.ပါဝင်သော လူဆိုးနှင်.ရဲ မျက်နှာအရေပြားများဖြတ်လှီးပြီးလဲလှယ်တပ်ဆင်ကြသည်.ရုပ်ရှင်ကိုသတိရမိသေးသည် ။ ထိုအလှပြင်ဆိုင်သို. သွားရမှာပင်အတော်သတ္တိမွေးရပေလိမ.်မည်။အဆိုတော်တွေကမြန်မာနာမည်ခံလျင်ဂုဏ်ငယ်သည်ထင်သည် ။ အချို.ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများမှာမြန်မာစာမသင်တော.သဖြင်.မြန်မာစာမတတ်သောမြန်မာလူတန်းစာတစ်ရပ်ပေါ်လာသည် ။
“ ငါအခုကိုယ်.ကိုယ်ကို သတိထားပြီး အကျင်.တစ်ခုကိုပြင်နေတယ်ကွ ၊အဲဒါကတော. ဖုန်းနံပါတ်တွေ ။လိပ်စာတွေ ၊ စာရင်းတွေရေးတဲ.အခါ အင်္ဂလိပ်ဂဏန်းတွေ ကိုပဲသုံးမိနေတဲ.အကျင်.ကို သတိထားပြင်ပြီး မြန်မာဂဏန်းနဲ.စာရေးမှတ်တဲ.အကျင်.ပဲဟ ။ကိုယ်.ကိုယ်ကိုသတိထားကြည်.တော.မှ ငါ.လက်ဟာတော်တော်အကျင်.ပျက်နေမှန်းသတိထားမိတယ် ။ဥပမာ သုံးတစ်ခြောက်လို.ကြားလိုက်တာနဲ.လက်က ( 316 ) ကိုရောက်သွားတယ် ( ၃၁၆ )လို.မနည်းပြင်ပြီးရေးရတယ် ။ပြီးတော. မြန်မာဂဏန်းကိုရေးတဲ.အခါ လက်ရေးလည်းမလှတော.ဘူးကွ ။မရေးတာကြာလို.ဖြစ်မယ် ။အဲဒိလိုပုံဆို နောင်လာမယ်.မျိုးဆက်တဆက်မှာ ( ၁၂၃၄၅၆၇၈၉ ) ဆိုတဲ.ဂဏန်းတွေ မြန်မာပြည်မှာပျောက်သွားလိမ်.မယ်ဟ ။ ငါတော. ကိုယ်.ကိုယ်ကိုပြင်ပြီး မြန်မာသက္ကရစ်ရော မြန်မာလ ကိုရော ရေးတဲ.အကျင်.လုပ်နေတယ် ။ဒါနဲ. ဒီနေ.မြန်မာလိုဘယ်နှစ်ရက်နေ.လဲသိလား “ ဟုမေးရာ ကျွန်တော်လည်း လဆန်း (၂ )ရက်လိုလို ၊လဆုတ် (၄ )ရက်လိုလို ၊၀ါခေါင်လိုလို ၊ တော်သလင်းလိုလို ၀ါးတားတားဖြစ်နေသဖြင်.မိမိကိုယ်ကိုယ်ရှက်မိ၏။၁၃၇၆ခုနှစ်ဆိုတာလေးတစ်ခုတော.မှတ်မိသေးသဖြင်.တော်ပေသေး၏ ။
ဘိုဆန်ချင်သောရောဂါတွင်အဆိုးဆုံးမှာကျောင်းများတွင် ပြဌာန်းစာအုပ်များ၌် ဘာသာရပ်အားလုံးကို အင်္ဂလိပ်လိုကျက်မှတ်သင်ယူစေခြင်းဖြစ်သည် ။ အနှစ်ကိုအကာကကွယ်သွားခြင်းဖြစ်သည် ။ ပညာသင်ကြားသောမူလရည်ရွယ်ချက်မှာလောကဓါတ်ပညာများကိုမိမိအသိထဲသို.အကောင်းအဆိုးခွဲခြားကာထင်ထင်လင်းလင်းသိမြင်သွားစေဖို.ဖြစ်သည်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်.ရေးသားထားသောစာကြောင်းများကိုကြက်တူရွေးတစ်ကောင်ကဲ.သို.နှုတ်တက်ရွရွ ရွတ်ဆိုနိုင်ကာမျှနှင်. ကမ္ဘာ.အဆင်.ပညာတစ်ခုရသွားပြီဟုမဆိုသာပေ ။ ထိုးထွင်းသိမြင်ကြံဆနိုင်မှပညာမည်ပေ၏ ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင်.ပဲသင်သင် မိခင်ဘာသာစကားနှင်.ပဲသင်သင် ရူပဗေဒသင်လျင်ရူပဗေဒပညာကိုတတ်မြောက်မှ ထိရောက်ပေမည် ။ ဓါတုဗေဒသင်လျင် ဓါတုဗေဒကိုနားလည်သွားသင်.သည် ။ သမိုင်းကိုသင်လျင် သမိုင်းဖြစ်ရပ်များကို သုံးသပ်နိုင်ရပေလိမ်.မည် ။ Master ဘွဲ.ယူမည်. ကျောင်းသူတစ်ဦးစာကျက်နေသည်ကို ဘေးမှ ကြားဖူးသည် ။ သူက ဆက်ကာဆက်ကာ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုအော်ဟစ်ကျက်မှတ်နေသည် ။ သူကျက်နေသည်ကိုကျွန်တော်ကြားရသည်မှာ “ Along Phaya established the Kone Baung dynasty “ ဟူ၍ဖြစ်သည် ။ သူသည် ထပ်တလဲလဲအော်နေသည်မှာ “ အလောင်းဘုရား အက်စ်တဘလစ် ကုန်းဘောင် ဒိုင်နက်စတီ ၊ အလောင်းဘုရား အလောင်းဘုရား အက်စ်တက်ဘလစ် ကုန်းဘောင် ကုန်းဘောင် ဒိုင်နက်စတီ “ ဟူ၍ ဖြစ်သည် ။ ဤကိစ္စ၌ သမိုင်း မဟာဝိဇ္ဖာတန်းတက်နေသောကျောင်းသူတစ်ယောက်အနေဖြင်. အလောင်းမင်းတရားသည် ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ.သည်ဆိုသော သမိုင်းအမှတ်အသားကိုတော.သိမည်ဖြစ်သည် ။သို.သော် သူ.အတွက်လာ၍ ဒုက္ခရောက်နေဟန်ရှိသည်မှာ Establish ဆိုသော စကားလုံးနှင်. Dynasty ဆိုသောစာလုံးများဖြစ်ပုံရသည် ။ တနည်းအားဖြင်.မြန်မာ.ပညာရေးသည် အနှစ်ကိုပစ်ပါယ်၍ အကာကိုရှာခိုင်းသောပညာရေးဖြစ်ပုံရသည် ။ ရန်ကုန်တိုင်း ၊မြောက်ဥက္ကလာ အ.ထ.က(၁) တွင် ဆဌမတန်း၌ စာသင်ခန်းတစ်ခန်းလျင် ကျောင်းသား (၇၅)ဦးထားကာသင်ကြားနေသည်ဟုသိရတော. အံ.သြလွန်းသဖြင်.မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါသည် ။ ဒီလောက်ကြပ်ညပ်နေသောစာသင်ခန်းတွင်အင်္ဂလိပ်လိုပဲသင်သင် ကုလားလိုပဲသင်သင် ၊မြန်မာလိုပဲသင်သင် ဘာမှရေရေရာတတ်မြောက်မည်မဟုတ်ပါ ။
ဂျပန်နိုင်ငံ ။ထိုင်းနိုင်ငံ ၊စပိန်နိုင်ငံ ၊တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ စသည်.နိုင်ငံများဝယ် ကျောင်းသင်ခန်းစာအားလုံးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ် မှလွဲ၍အခြားဘာသာရပ်များအားလုံးကို မိခင်ဘာသာစကားနှင်.ပင်သင်ခိုင်း၏ ။ထို.ကြောင်.မြန်မာကျောင်းသားများကဲ.သို. အင်္ဂလိပ်လိုဂျောင်းဂျောင်းပြေး အလွတ်မရွတ်ဆိုနိုင်ကြသော်လည်း ဓါတုဗေဒကျောင်းသားသည် အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ.ကိုဓါတ်ခွဲခန်းတွင်လက်တွေ.ထုတ်လုပ်ပြနိုင်၏ ။ ရူပဗေဒကျောင်းသားသည် အလင်းယိုင်ခြင်းအကြောင်းကိုသူ၏မိခင်ဘာသာဖြင်.ကျကျနနရှင်းပြနိုင်၏ ။ ကျွန်တော်တို.ငယ်စဉ်က ဓာတုဗေဒ ၊ရူပဗေဒ ၊ ဘောဂဗေဒဘာသာရပ်များကိုမြန်မာလိုသင်ကြားခဲ.ကြရာအာခိမိဒိနိယာမ ၊ ရေငွေ.ပျံခြင်း ၊ သမ၀ါယမ၏အခြေခံမူ(၅)ချက် ၊ စွမ်းအင် ၊အလုပ် စသော သင်ခန်းစာများကိုယခုတိုင်သေသေချာချာမှတ်မိနေ၏ ။ ယနေ.ဘာသာစုံအင်္ဂလိပ်လိုသင်နေပါသည်ဆိုသော ဆယ်တန်းသိပ္ဖံတွဲကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ရူပဗေဒသင်ခန်းစာမှ အင်နားရှား ( Inertia ) ဆိုသောသဘောတရားကိုမေးကြည်.ရာမသိဘူး ဟုဆိုသည် ။ သို.သော် သူက Modern Physics / Electricity and Magnetism / Optics /Wave and Sound / Heat / Mechanics ဆိုသော သင်ခန်းစာများကို နှုတ်တက်ရွရွ အလွတ်ဆိုပြ၏ ။ ၀တ်မှုန်ကူးခြင်းအကြောင်းကိုရေရေရာရာရှင်းမပြတတ်သော်လည်း The plant body တို. The flower , pollination and fertilization တို. Nutritiion တို. Respiration တို. Reproduction တို. Environmental biology တို.စသော ဇီဝဗေဒ သင်ခန်းစာများကိုတော. သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းအလိုက် အလွတ်ကျက်မှတ်ထားတာ ပြန်ဆိုပြနိုင်သည် ။ ဓါတုဗေဒတွင်လဲ ထိုနည်းနှင်နှင် ၊ပထ၀ီတွင်လည်း ကမ္ဘာ.မြေပုံကိုမကြည်.တတ်ကြ ။ မြန်မာပြည်သည်ဘယ်နားမှာရှိမှန်းမသိ ။ သချာင်္မှာလည်းပုစ္ဆာကိုနားလည်ဖို.ပင်မနည်းအားထုတ်နေရသည် ။ တကယ်သင်ကြားရမည်.အင်္ဂလိပ်စာဘာသာတွင်မူကား Verb မှန်းမသိ Noun မှန်းမသိတော်ရိလျော်ရိတွေဖြစ်ကာ အင်္ဂလိပ်စာနှင်. B.A အီးမေဂျာဘွဲ.ရသူတွေပင် အင်္ဂလိပ်စာ ရှည်ရှည်တစ်ကြောင်းကို မှန်ကန်အောင်မရေးတတ် ၊ မဖတ်တတ်၊ မပြောတတ်၊သူများပြောတာကိုနားလည်အောင်နားမထောင်တတ် ။ တကယ်တတ်အောင်သင်ရမည်. အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်ကို တတ်အောင်မသင်နိုင်ပဲ ၊ ဓါတုဗေဒ တို. ရူပဗေဒတို.သမိုင်းတို.ကို အင်္ဂလိပ်လိုသင်နေတာဘယ်လိုမှနားလည်၍မရပေ ။ဤစနစ်သည်အလုပ်မဖြစ်သဖြင်. တစ်မျိုးပြောင်း၍စဉ်းစားသင်.ပေပြီ ။
အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျောင်းသင်ဘာသာရပ်အားလုံးကိုထိုင်းဘာသာဖြင်.ပင်သင်ကြားသော်လည်း ပြင်ပကမ္ဘာ၌ထွက်ပေါ်လာသောနည်းပညာအသစ်အဆန်းထွက်လာသမျှသောစာအုပ်အားလုံးကို အချိန်မဆိုင်းပဲ ထိုင်းဘာသာဖြင်.ပြန်ဆိုထုတ်ဝေကြသဖြင်.ကမ္ဘာ.အဆင်.ဗဟုသုတများကိုထိုင်းတို.အမြဲရနေပေသည် ။ ။ဤအလုပ်ကို အစိုးရပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘာသာပြန်ဌာနစိတ်က တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ရပေမည် ။ကျွန်တော်တို.ဆီတွင်အင်္ဂလိပ်လိုလဲလောက်လောက်လားလားမဖတ်တတ်။မြန်မာဘာသာပြန်နည်းပညာစာအုပ်များကလည်း မရှိသလောက်ရှားပါးလှသည် ။ဒီကြားထဲပညာတတ်ဆိုသူများကစကား ဆယ်ခွန်းပြောလျင်ငါးခွန်းလောက်ကအင်္ဂလိပ်စာလုံးများကိုညှပ်ပြောသေးသည်။ကြော်ငြာတစ်ခုတွင်ဒိန်ချဉ်ကို ရောဂါတ်ဟုပြောသွားတာကြားရတော.နားကသိကအောက်ဖြစ်ရသည်။ပြိုင်ပွဲများတွင် အစဉ်အဆက် ပထမဆု ၊ဒုတိယဆု ၊တတိယဆုဟုမြန်မာလိုကြေငြာနေရာမှယခုအခါ ဒုတိယဆုကို ( 1st Runner Up ) တတိယဆုကို ( 2ndRunnerUp)စသည်ဖြင်.မရှုပ်ရှုပ်အောင်ကြေငြာကြသည်။
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံတကာသုံးဘာသာစကားဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုဆန်.ကျင်နေခြင်းမဟုတ်။ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြောဧည်.လမ်းညွှန်လုပ်နေသဖြင်. အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၏အရေးပါပုံကိုသိပါ၏။သို.သော်အရာရာသည်သူ.တန်ဘိုးနှင်.သူရှိသည် ။တက္ကသိုလ်အဆင်.လောက်တွင်သိပ္ဖံဘာသာရပ်များကိုအင်္ဂလိပ်လိုသင်ကြားလိုကသင်ကြားနိုင်ပါသည် ။ သို.သော် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဟူသော အလံကြီးကိုထူလာသဖြင်. မူရင်းဘာသာစကား ၊မိခင်စာပေ နှင်. ယဉ်ကျေးမှု ကို ဘေးသို.ဖယ်ထုတ်လိုက်ကြရန်အထိကားကျွန်တော်တို.မမိုက်မဲသင်.ကြကုန် ။ နှင်းဆီပန်းကို Rose ဟုမခေါ်ရုံမျှနှင်.လည်း မွှေးရနံ.သည်ခမ်းခြောက်သွားမည်မဟုတ် ။ ဂျာနယ်အမည်ကိုအင်္ဂလိပ်နာမည် ပေးရုံ၊ကားနံပါတ်ကိုအင်္ဂလိပ်အက္ခရာနှင်.ဂဏန်းတပ်ရုံ၊ကျောင်းသင်ခန်းစာများကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြဌာန်းရုံဖြင်.အလိုလိုကမ္ဘာ.အဆင်.မီလာမည်မဟုတ်။ ကမ္ဘာ.အဆင်.မီလိုလျင် ကမ္ဘာကလက်ခံကျင်.သုံးနေသော ပညာ ၊စည်းကမ်း ၊ စီမံခန်.ခွဲမှု ၊ ဥပဒေလိုက်နာမှု ၊ ကမ္ဘာ.အဆင်.မီတွေးခေါ်မှု၊ကမ္ဘာ.အဆင်.မီလုပ်ခလစာ၊ငါနှင်.ငါ.မိသားစုအတွက်သာဟူသောအောက်တန်းကျသည်.စိတ်ဓါတ်များကိုစွန်.ပါယ်နိုင်မှု၊လူကြီးလူကောင်းပီသမှု၊အလုပ်ကိုအလုပ်နှင်.တူအောင်လုပ်နိုင်မှုစသည်.အရည်အချင်းများရှိဖို.လိုပေလိမ်.မည် ။
ဗိသနိုး ၊ဟန်လင်း သရေခေတ္တရာ ၊ တကောင်း ၊ ပုဂံ ၊ နိုင်ငံတော်များမှစကာ ရွေ.လျားဖြစ်ပေါ်ခဲ.သောမြန်မာစာ မြန်မာအရေးအသား ကို အလေးထားချိန်တန်ပါပြီ ။ အင်္ဂလိပ်စာလဲကောင်းကောင်းမတတ် ၊မြန်မာစာလဲ ဌာန်ကရိုဏ်းကျအောင်မတတ်သော ကျီးမဟုတ် ဒေါင်းမဟုတ် အောက်ကလိအာများအဖြစ်မှမြန်မာတို.ရုန်းထွက်ရန်အချိန်တန်ပါပြီ။ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများကလည်း အင်္ဂလိပ်အက္ခရာများသုံးတော.မည်ကြံလျင် စောလူးမင်းကျောက်စာတို. ၊ ရာဇကုမာရကျောက်စာတို. ၊ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတို.၊သခင်ဘသောင်းတို.၊တော်ဘုရားကလေး(အောင်ဇေ) တို.ကို အားမနာလျင်တောင် ယခုလက်ရှိဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ မြန်မာစာသည်ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်သည် ဟူသောစာပိုဒ်ကိုတော. လေးစားအားနာသင်.ပါကြောင်း ။
အလုပ်သမားကုပ္မဏီအချို့က လုပ်ခလစာတွေမရှင်းပဲလိမ်လည်ထွက်ပြေးသွားတာကို မြို့နယ်အလုပ်သမားရုံးများကလဲဖြေရှင်းမပေးတာကြောင့် လမ်းအလုပ်သမား(၈၀)ခန့် စားဝတ်နေရေးအတွက် ဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်။
ပဲခူးတိုင်း၊ပေါင်းတည်၊နတ္တလင်း၊မြို့နယ်များအတွင်းက သဖန်းကုန်း(တာပွန်)လမ်း၊လှပခြင်းလမ်း၊ဓမ္မငယ်လမ်း၊စတဲ့ဒေသဆိုင်ရာကျေးလက်လမ်းတွေ ပြုလုပ်ရန်အတွက်နိုင်ငံတော်ကကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖျြုးရေးရံပုံငွေ၊ဘတ်ဂျက် သိန်း(၄၂၀၀)ချထားပေးခဲ့ပြီး၊၂၀၁၃ခု၊မတ်လ ကစတင်ပြီး ၂၀၁၃ခု၊အောက်တိုဘာလမှာ လမ်းများကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသည့်တိုင်အောင် လမ်းလုပ်ရာတွင်၊ပုဒ်ပြတ်စံနစ်နဲ့ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ဒေသခံ အလုပ်သမား၊ကားသမား၊လူ(၈၅)လောက်ကို ရှင်းပေးရမဲ့ငွေကျပ်သိန်း(၂၀၀)ကျော် ကို အခုထိမရှင်းသေးတာကြောင့်၊အလုပ်သမားတွေဒုက္ခရောက်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလမ်းကို ရွှေလွင်လွင်ကုပ္မဏီ၊က လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး၊နောက် ကံထရိုက်တာဝန်ခံများဖြစ်တဲ့၊ဦးမြင့်ထွန်းနိုင်၊မဂ်လာဈေး(ရန်ကုန်မြို့)နဲ့ ၊ဦးဆန်းလှိုင်-ရတနာအိမ်ယာ၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ တို့က တာဝန်ယူရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပြီး၊ဒီနေ့ထိရှင်းမပေးဘဲ တိမ်းရှောင်လိမ်လည်ထွက်ပြေးနေတာဖြစ်ပါတယ်
မြို့နယ်အလုပ်သမားရုံး၃)ခါလောက်သွားပြောတော့လဲ လူကြီးမရှိဘူး၊ဆိုလို့(မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး)ရုံးကိုသွားပြောတော့မှ ခေါ်ပြီးညှိပေးမယ်ဆိုပြီး သူတို့ခေါ်တာ(၃)ခါရှိပြီ လာပြီးမရှင်းဘူး၊အသက်(၁၆)နှစ်မပြည့်သေးတဲ့၊ခလေးငယ်(၆)ယောက်လောက်ကိုတော့ကျမစိုက်ပြီးရှင်းပေးထားတယ်လို့ ဒေသခံအလုပ်သမားတဦးကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ယဉ်(၁၅)စီးလောက်နဲ့ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတာ ပထမတော့ အနဲငယ်ရှင်းပေးပြီး ကျန်တာတွေကိုနောက်မှရှင်းမယ်ဆိုပြီး အခုထိ ကားအလုပ်သမားနဲ့ ကားခတွေ သိန်း(၅၀)ကျော်လောက်ကိုအခုထိရှင်းမပေးတာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်လို့။ကားအလုပ်သမားတယောက်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်
။လမ်းစခင်းကထဲက သူတို့က ကံထရိုက်အဆင့်ဆင့် နဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတာသူတို့လဲထိုက်သင့်တဲ့အကျိုးအမြတ်လဲရထားပြီးသားဖြစ်တယ်၊အခုလဲအလုပ်သမားခတွေ မပေးချေပဲလုပ်သွားတာကိုသိရပြီ၊သူ့အနေနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကသူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကိုတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မြင့်သိန်းက အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
အဲဒီဒေသဆက် ကျေးလက်လမ်းတွေ ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကို ဒေသခံ အလုပ်သမားတွေ တနေ့ကို(၁၅၀၀)(၂၀၀၀)(၂၅၀၀)ကျပ်စတဲ့ လုပ်အားခတွေနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြ့ပီး၊ကျောက်မြေ၊သယ်ပို့၊ချ ဖို့အတွက် ကားခအပါအ၀င်ကျပ်(၃၇၀၀၀)နဲ့ ၊အသီးသီးဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီး၊လမ်းဖွင့်ပွဲပြီးဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင်ကုပ္မဏီဖက်က လုပ်အားခတွေ ရှင်းမပေးဘဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့တာ ကြောင့် အလုပ်သမားတွေဒုက္ခရောက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသတွင်းက လမ်းခင်းရာတွင်အသုံးပြုတဲ့ ကျောက်ကြီး ၀ယ်ယူရာမှာလဲငွေချေမှုမရှိဘဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတာကြောင့် နတ္တလင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားကြောင်းကိုလဲ ကျောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ဒမငယ်ရွာက ဦးသန်းထွန်းကလဲ DVB ကိုပြောပြပါတယ်။
အဲဒီလုပ်အားခတွေပေးချေမှုမရှိတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကံထရိုက်တာဝန်ခံများဖြစ်တဲ့၊ဦးမြင့်ထွန်းနိုင်၊မဂ်လာဈေး(ရန်ကုန်မြို့)နဲ့ ၊ဦးဆန်းလှိုင်-ရတနာအိမ်ယာ၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ တို့ကို ဖုန်းနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ ဖုန်းပိတ်ထားတာကြောင့် ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။
ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှအစ်ကိုကြီးများ (၇ ) ဇာတ်သိမ်း ကိုစိန်ဝင်း
ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှအစ်ကိုကြီးများ (၇ ) ဇာတ်သိမ်း
ရှေ.တွင်ရေးသားဖော်ပြခဲ.သော ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှအစ်ကိုနှစ်ယောက်မှာ နိုင်ငံကျော်များဖြစ်သဖြင်. ဤအစ်ကိုသည်လည်း မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)ပင်ဖြစ်လေသလော ၊ N.C.G.U.B ပြည်ပြေးအစိုးရမှ ဒေါက်တာစိန်ဝင်းပင်ဖြစ်လေသလော ၊လူထုစိန်ဝင်းပင်ဖြစ်လေသလောဟုမထင်ကြစေလိုပါ ။ ယခုကျွန်တော်ဖော်ပြလတံ.သော ကိုစိန်ဝင်းမှာ ပြည်မြို. တရုတ်စုရပ်ကွက်၊ မြင်းတပ်လမ်း တွင်နေထိုင်သော ဦးစိန်မောင်၏သား ငယ်နာမည်ရော ကြီးနာမည်ရောတစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည်. မြင်းလှည်းမောင်းခြင်း ၊တွင်ခုံအလုပ်သမားဖြစ်ခြင်းစသည်.အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများလုပ်ကိုင်စားသောက်သည်. ပြည်မြို.သားမောင်စိန်ဝင်းပင်ဖြစ်လေသည် ။ အနှီ မောင်စိန်ဝင်းသည် ကျွန်တော်၏တတိယအစ်မဖြစ်သည်. မသီတာမေ၏ ချစ်လှစွာသောခင်ပွန်း ၊လင်ယောက်ကျား ဟတ်စဘန်.ဖြစ်လေသည် ။
ကိုစိန်ဝင်း၏ရုပ်ရည်ကိုအလွယ်ကူဆုံးနှင်.အထိရောက်ဆုံးဖော်ပြရလျင် အခြားကိုမကြည်.ပါနှင်. ၄၅ ကျပ်တန်ငွေစက္ကူမှ ရေနံမြေသခင်ဖိုးလှကြီးပုံကိုသာမြင်ယောင်ကြည်.လိုက်ကြစေလိုပါသည် ။ ထိုပုံသည်သူနှင်.ချွတ်စွတ်တစ်ထပ်တည်းတူပေ၏ ။ မသီတာနှင်.ကိုစိန်ဝင်းအိမ်ထောင်ကျသောကာလများတွင်ကျွန်တော်သည် ခုနစ်တန်းကျောင်းသားဘ၀သို.ရောက်ရှိနေပေပြီ ။ ရှေးကဖော်ပြခဲ.သလိုပင် နံပါတ်(၁) အစ်မကြီး တက္ကသိုလ်ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စနှင်.မိဘ သဘောမတူသူနှင်.အိမ်ထောင်ကျသွားပြီးသည်.နောက်တွင်ကျွန်တော်.အဖေသည် အတော်စိတ်ဓါတ်ကျသွားပုံရ၏ ။ အလုပ်ကိုလဲဖိဖိစီးစီးမလုပ်တော.သဖြင်. အဘိုးလက်ထက်ကတည်းက ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်လာခဲ.သောခေတ္တရာဓါတ်ပုံဆိုင် ဟူသည် . ဓါတ်ပုံဆိုင်လုပ်ငန်းသည် တစ်စတစ်စကျဆင်းလာတော.၏ ။ နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်တော်.အဖေသည် ဓါတ်ပုံဆိုင်ပစ္စည်းများကို ပေးသင်.တာပေး ၊ရောင်းသင်.တာရောင်းကာ လုပ်ငန်းကို အပြီးအပိုင်ရပ်စဲလိုက်လေ၏ ။ ထိုအလုပ်အစား ၀င်ငွေအတည်တကျမရှိသော ကော်လံစားသတင်းထောက်တစ်ယောက်ဘ၀ကိုခံယူကာ မိုးလင်းသည်နှင်. ကင်မရာတစ်လုံးကို ကိုင်ကာ အိမ်မှထွက်သွားတော.သည် ။တစ်ခါတစ်ရံ သုံးလေးရက်ပင်အိမ်ကိုပြန်မလာပါ ။ တိုတိုပြောရလျင် ကျွန်တော်တို.အိမ်စီးပွားရေးသည် တရိပ်ရိပ်ကျဆင်းလာတော.၏ ။
ထိုအခါအမေသည်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှဝင်ငွေရစေရန် ပြည်မြို.လမ်းမတော်လမ်းနှင်.စစ်ကဲလမ်းထောင်.တွင် ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ ၊ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ ၊အုန်းနို.ခေါက်ဆွဲများကို ဆိုင်ဖွင်.လှစ်ရောင်းချရတော.သည် ။ ထိုလုပ်ငန်းမှာအတော်ပင်အဆင်ပြေပါ၏ ။ သို.သော် အမေသည်အိမ်မှာနေရသည်မရှိ ။ တစ်နေ.လုံး အိမ်မှထွက်ကာ ခေါက်ဆွဲဆိုင်သွားဖွင်.နေရပြီး ညဆယ်နာရီခန်.မှ နေ.စဉ်အိမ်ပြန်လာနိုင်ပေ၏ ။ အဖေကလည်းတစ်နေ.လုံးအပြင်သို.သွားနေသည်ကများသည် ။ ထိုသို.နှစ်လကြာရှည်ဖြစ်လာသောအခါ အိမ်တွင်အုပ်ချုပ်မည်.သူလူကြီးမရှိသဖြင်. လစ်ဟာလာ၏ ။ကျွန်တော်တို.ညီအစ်ကိုမောင်နှမများမှာ ရပ်ကွက်ထဲတွင် မျက်နှာငယ်လာရ၏ ။ အချို.ကအနိုင်ကျင်.သလိုအပြုအမူများကိုပင်ပြသလာကြရာ ထိုအကြောင်းကိုသိသောမိခင်ကြီးသည် ၀င်ငွေပုံမှန်ရနေသောခေါက်ဆွဲဆိုင်ကို ဖြုတ်လိုက်သည် ။ အိမ်နေရင်းဝင်ငွေရစေရန် အိမ်ရှေ.တွင် ကွမ်းယာဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်တည်လိုက်သည် ။
ထိုအချိန်တွင်မြွေပူရာကင်းမှောင်.သည်.သဖွယ် အစ်မကြီးမာလာဝေသည် သုခမိန်လှိုင်နှင်.အိမ်ထောင်ကွဲကာ ကလေးတစ်ပြုံကြီးလက်ဆွဲ၍ မိဘထံပြန်ရောက်လာရာ ဖခင်ကြီးသည် မိမိကလေးများသာမက သုခမိန်လှိုင်နှင်. မာလာဝေ၏ သားသမီးများကိုပါ မရှိမဲ.ရှိမဲ.ကြားထဲကတင်ကျွေးထားရပြန်ပါသည် (ထိုစဉ်ကသုခမိန်လှိုင်နှင်.တရားဝင်မကွာရှင်းရသေးသဖြင်. ကလေးစားရိတ်ထောက်ပံ.ငွေမရသေးပါ )။ သို.သော် ကျွန်တော်.အဖေရောအမေရောစီးပွားပျက်နေသည်.ကြားမှမြေးများကိုမငြီးမငြူကျွေးမွေးစောင်.ရှောက်ခဲ.သည်မှာ ယခုအခါ ပညာတတ်ကြီးများဖြစ်နေပြီဖြစ်သော မာလာဝေ၏သားသမီးများသည်ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်ပါက ကျွန်တော်.ဖခင်နှင်.မိခင်ကိုတစ်နေ.ဆယ်ကြိမ်လောက်ရှိခိုးကန်တော.ဖို.ကောင်းလေသည် ။
လိုရင်းကိုပြန်ကောက်ရလျင်အိမ်ရှေ.တွင်ကွမ်းယာဆိုင် ဖွင်.လှစ်ရောင်းချသောအခါ ကျွန်တော်.အစ်မမသီတာလည်း အလှည်.ကျဆိုင်ထိုင်ရ၏ ။ လောကထုံးစံအရ အဖွားကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်သော ကျွန်တော်.အမေဒေါ်မြင်. ဆိုင်ထိုင်ရောင်းချသည်ထက် အပျိုလေးဖြစ်သောကျွန်တော်.အစ်မ သီတာမေ ဆိုင်ထိုင်ရောင်းချလျင် ပိုရောင်းအားတက်လာ၏ ။ အထူးသဖြင်. လူငယ်လူရွယ်များက ကွမ်းယာဝယ်ရင်း အစ်မကိုလာရောက်ပိုးပန်းကြခြင်းဖြစ်သည် ။အစ်မ သီတာမေကလည်းထိုခေတ်တွင် ပြည်မြို. Holy Star တေးဂီတတွင်ပင်တိုင်အဆိုတော်ဖြစ်ရာပြည်မြို.တွင်အတော်ပင်လူသိများလေ၏။ ထိုသို. ကာလသာများ ဆိုင်သို.၀င်ထွက်နေကြသောအထဲတွင် မောင်စိန်ဝင်းဆိုသော သူငယ်လည်းပါဝင်ရာ ထိုသူငယ်ကိုအမေကြီး ဒေါ်မြင်.သည်အတော် သဘောတွေ.လေ၏ ။ ရိုးရိုးသားသားသိမ်သိမ်မွေ.မွေ.နှင်.မိကောင်းဖခင်သားသမီးဖြစ်ပုံပေါ်သော မောင်စိန်ဝင်းကိုအမေက မသီတာနှင်.သဘောတူသည် ။သူတို.ချင်းကလည်းလူငယ်ချင်းရည်ငံနေကြပြီဟုသိရသည် ။ထို.ကြောင်.အမေသည် မောင်စိန်ဝင်းအား သမီးဖြစ်သူကိုနှစ်သက်ပါကမိဘများကိုခေါ်၍လာရောက်တောင်းရမ်းပါဟု စကားကမ်းလှမ်းသည် ။ ထိုအခါ ကိုစိန်ဝင်းသည် လူကြီးမိဘများကိုခေါ်လာကာ လာရောက်စေ.စပ်ကြောင်းလမ်းသည် ။ နှစ်ဖက်မိဘများကသဘောတူပြီးသတင်းကျွတ်လျင်ပေးစားမည် ဟုမင်္ဂလာပွဲကျင်းပရန် ရက်သတ်မှတ်လိုက်ကြသည် ။ သို.သော် ကျွန်တော်.မိဘများသည် သမီးလေးယောက်ရှိရာတစ်ယောက်မှမင်္ဂလာပွဲကျင်းပရန် ဇာတာပါမလာသည်.သဖွယ် ကိန်းသေပေါက်တွက်ထားသော မသီတာမေ ၏လက်ထပ်ပွဲမှာကျွန်တော်.အစ်မသည်မစောင်.နိုင်မဆိုင်းနိုင်ဝါတွင်းကြီး ကိုစိန်ဝင်းနှင်.ပင် လင်နောက်လိုက်ပြေးခြင်းဖြင်. မင်္ဂလာပွဲနိဌိတံရလေ၏ ။တိုတိုပြောသော် ကိုစိန်ဝင်းနှင်.ကျွန်တော်.အစ်မ သီတာမေ အကြင်လင်မယားဖြစ်သွားကြပေ၏ ။
ကိုစိန်ဝင်းသည် အလွန်ရိုးသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည် ။သူ၏ စရိုက်ကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားတိုင်း သတိရမိသည်မှာ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီးချားလ်ဒစ်ကင်း၏ မျှော်တလင်.လင်. ( Great Expectation ) ဆိုသောဝတ္တုထဲက အဓိကဇာတ်ဆောင် ပစ် (ခေါ်)ဖီးလစ်ပါရစ် ၏ယောက်ဖတော် ဂျိုးဂါဂျရီကိုဖြစ်သည် ။ ဂျိုးဂါဂျရီသည် ပစ်( Pip )၏ယောက်ဖဖြစ်သော်လည်း ညီအစ်ကိုသဖွယ်ပင်ဖြစ်သည် ။ ပန်းပဲဆရာဂျိုးသည်အလွန်သဘောကောင်းပြီး မယားဖြစ်သူ လည်သလောက် သူကအသူဖြစ်သည် ။ အစ်မ၏မြည်တွန်တောက်တီးမှုကို သမီးယောက်ဖနှစ်ယောက်ခံဖော်ခံဖက်ဖြစ်သည် ။လူကောင်ကြီးသလောက်စိတ်ထားနူးညံ.သူဖြစ်သည် ။ ကလေးသာသာ ပစ်နှင်. ညီအစ်ကိုလိုလည်ပင်းဖက်ပေါင်းသူဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်.ယောက်ဖ ကိုစိန်ဝင်းသည် ကျွန်တော်တို.အတွက် ဂျိုးဂါဂျရီလိုယောက်ဖမျိုးဖြစ်သည် ။သူသည် ကျွန်တော်တို.ညီအစ်ကိုများနှင်.တစ်သားတည်းရင်းရင်းနှီးနှီးနေသောယောက်ဖဖြစ်သည် ။ သူကပညာမတတ် ။ သူအိမ်ထောင်ကျသောအခါ သူ.ဖခင်ဦးစိန်မောင်က မြင်းလှည်းတစ်စီးဝယ်ပေးသည် ။ ဤသို.ဖြင်.သူသည် ပြည်မြို.တွင်မြင်းလှည်းဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည် ။ တစ်နေ.တွင်ကိုစိန်ဝင်းသည် ရွက်လှပန်းအိုးကြီးနှစ်လုံးကိုဘယ်ကဘယ်လိုရလာမှန်းမသိအိမ်သို.ယူလာ၏ ။ အစ်မကဘာလုပ်ဖို.လဲဟုမေးလျင် ငါ.ညီ ၊ ညီညီမိန်းမယူလျင် မင်္ဂလာဆောင်မှာသုံးရတာပေါ.ဟု ဆိုလေသည်။ ထိုစဉ်ကကျွန်တော်မှာ ကိုးတန်းကျောင်းသားဘ၀ပင်ရှိသေးရာ အိမ်သားများကသူ.အကြံကိုရယ်ကြလေသည် ။
သူသည်ပညာမတတ်သော်လည်း ယောက်ဖများဆယ်တန်းအောင်၍ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဖြစ်လာကြခြင်းကိုသူအလွန်ဂုဏ်ယူသည် ။စကားစပ်မိလျင် ဘာမှတ်သလဲကွ ငါ.ယောက်ဖတွေက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟုကြိမ်းဝါးလေ.ရှိသည် ။ သူသည်မြင်းလှည်းမောင်းရင်း အနည်းငယ်သောက်တတ်စားတတ်ဖြစ်လာ၏ ။ အရက်သောက်မှုအတွက်ကျွန်တော်.အစ်မ သီတာမေနှင်.တကျက်ကျက်ရန်ဖြစ်သည် ။ နောက်ဆုံးမြင်းလှည်းမောင်း၍ အရက်သမားဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်.အစ်မကယူဆကာ မြင်းလှည်းကိုရောင်းလိုက်ပြီး ပြည်မြို.ပန်းတဉ်းတန်းရပ်ရှိ ဦးလူကလေး ၀ပ်ရှော.တွင် အလုပ်သမားဝင်လုပ်၏ ။ ထိုသို.အလုပ်သမားအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေစဉ် ရသမျှနေ.တွက်လုပ်အားခကိုကျွန်တော်.အစ်မအားတစ်ပြားမချန်အကုန်အပ်နှံလေ.ရှိသည် ။သို.သော်အရက်သောက်သောအကျင်.မှာပျောက်မသွား ။အစ်မ မသိအောင်တစ်မျိုး သိအောင်တစ်မျိုး ယမကာမှီဝဲတတ်လာသည် ။သို.သော်အရက်သောက်ပြီးမူးယစ်သောင်းကျန်းမှုဟူ၍တစ်ခါမှမရှိ ။ မည်သူ.ကိုမှအနှောက်အယှက်မပေးပဲအေးအေးနေလေ.ရှိသည် ။ အပေါင်းအသင်းမင်သူဖြစ်၍မည်သူကပဲလာခေါ်ခေါ်အရက်ဆိုင်သို.ပါသွားတတ်သည် ။ ၀ပ်ရှော.တွင်လုပ်သက်ကြာလာသည်နှင်. လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုလည်းတိုးတက်လာပြီး နေ.တွက်လုပ်အားခလည်းပိုလာသည် ။ တစ်ဆက်တည်းပင် အရက်ကိုတဖြည်းဖြည်းစွဲသည်.အဆင်.သို.ရောက်လာ၏ ။ မသောက်ရလျင်ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်လာသည် ။ စက်ပစ္စည်းများနှင်.အန္တရာယ်များသော အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေရသည်.အတွက် အရက်ကိုဆက်သောက်နေလျင်ဝမ်ရှော.မှအလုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းရလိမ်.မည်ဟုအလုပ်ပိုင်၇ှင်ကသတိပေးသည် ။ ကျွန်တော်.ယောက်ဖသည် အရက်ကိုဖြတ်ဖို.အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားသည်။ သို.သော် အယ်လ်ကိုဟော၏လွမ်းမို.ချုပ်ကိုင်ခြင်းကိုမရုန်းနိုင်အောင်ခံနေရပြီဖြစ်သောကိုစိန်ဝင်းသည် ယမကာကိုမပြတ်နိုင်ရကား ၀ပ်ရှော.အလုပ်သမားဘ၀မှဈာန်လျှောရရှာတော.၏ ။ထိုအချိန်မှစကာ ကျွန်တော်.အစ်မ မသီတာနှင်.ကိုစိန်ဝင်းသည် အိမ်ထောင်ရေးကွဲလိုက် ပြန်ညှိနှိုင်း၍အဆင်ပြေလိုက်ဖြင်. သံသရာလည်နေရာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ကွဲ၍ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပြန်ပေါင်းကြမှန်းပင်ကျွန်တော် တို.မမှတ်မိတော.ပေ ။ ယောက်ဖသည် လူရိုးလူကောင်းတစ်ယောက်ဘ၀မှ အရက်ကျေးကျွန်ဘ၀သို.ရောက်သွားကာ နောက်ဆုံးတွင်အရက်ဆိုင်မှပင်မပြန်တော.ပဲ အချိန်ရှိသရွေ. သောက်စား၍သာနေပေတော.သည် ။
၁၉၉၆ တွင် ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်သောအခါ ကိုစိန်ဝင်းသည်ကျွန်တော်.မင်္ဂလာဆောင်သို.ရောက်လာ၏ ။တစ်ယောက်တည်းရောက်လာခြင်းဖြစ်သည် ။အ၀တ်အစားများမှာလည်း ကပိုကယိုမသေမသပ်ဖြစ်နေ၏ ။ ဘာလာလုပ်သလဲဟုကျွန်တော်.အစ်ကိုအောင်အောင်ကမေးရာ ယောက်ဖရာ ငါ.ညီမင်္ဂလာဆောင်တာဝမ်းသာလွန်းသောကြောင်.လာပါသည် ။ငါ.ကိုယနေ.ညသောက်နိုင်ရန်အရက်ဖိုးမစပါဟုတောင်းသောကြောင်. ကိုအောင်က ပိုက်ဆံထုတ်ပေးလိုက်ရာ ကတိအတိုင်း ဘာမှမနှောက်ယှက်ပဲပြန်သွားသည် ဟူ၏ ။ထိုအကြောင်းကိုနောက်မှ ကျွန်တော်.အစ်ကိုကပြန်ပြော၍သိရသည် ။ ထို.နောက်တွင်ကျွန်တော်.ယောက်ဖမောင်စိန်ဝင်းသည်ပြည်ဘူတာ မီးရထားသံလမ်းအနီးရှိအရက်ဆိုင်တွင် အရက်သမားလုံးလုံးဖြစ်ကာ အချိန်ပြည်.တပ်စွဲနေလေသည် ။ ကျွန်တော်တို.ဖြတ်သွား သည်ကိုမြင်လျင်အရက်ဖိုးထွက်တောင်းလေ.ရှိသည် ။ သူ.မှာထူးထူးအောင်ဟူသော သားတစ်ယောက်ရှိသည် ။ သူ.သားသည် သူ.အဖေအရက်သောက်တာကို၇ှက်သဖြင်. ထိုအရက်ဆိုင်ရှေ.မှတတ်နိုင်သမျှမဖြတ်ပဲနေသည် ။ ကျွန်တော်တို.သည်သူ.ကိုမည်သို.မျှပြုပြင်၍မရသဖြင်. သူ.ထိုက်နှင်.သူ.ကံဟုသာပစ်ထားလိုက်ရတော.သည် ။ တစ်နေ.သောအခါတွင်တော. ..မျှော်လင်.နေခဲ.သောနေ.သို.ရောက်လာသည် ။ ကိုစိန်ဝင်းသည် အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြင်.အရက်ဒဏ်ကြောင်.ကွယ်လွန်သွားသည်.သတင်းကျွန်တော်တို.ထံသို.ရောက်လာ၏ ။ ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရောက်နေသဖြင်.သူ.နောက်ဆုံးခရီးကိုကျွန်တော်လိုက်မပို.လိုက်ရပါ ။
ကျွန်တော်၏ယောက်ဖသုံးဦးတွင်ကိုစိန်ဝင်း၏ဘ၀သည် ကျန်နှစ်ဦးနှင်.မတူ ပေ ။သူသည်နိုင်ငံကျော်တစ်ဦးမဟုတ် ။ သူ.တွင်နိုင်ငံကျော်လောက်သောအရည်အသွေးဘာမှမရှိ ။ သို.သော် သူသည် ဘ၀ကိုအရိုးရှင်းဆုံးနေထိုင်သွားခဲ.သည် ။ မိုက်မဲသော်လည်း ကောက်ကျစ်ယုတ်မာမှု သူ.တွင်ကင်းခဲ.သည် ။ ယောက်ဖသုံးယောက်တွင်ကျွန်တော်တို.နှင်.သဟဇာတအမျှဆုံး ဖြစ်သည် ။ အနုပညာသမားများအနေနှင်.ကျန်နှစ်ယောက်ကိုလေးစားသော်လည်း လူသားတစ်ယောက်အနေနှင်.မူကျွန်တော်တို.သည် ကိုစိန်ဝင်းကိုအမှတ်ပြည်.ပေးခဲ.ပါသည် ။ ထွေလီကာလီ မာယာတွေမပါပဲအရိုးခံအတိုင်းယောက်ဖများကိုခင်မင်ခဲ.သော ကိုစိန်ဝင်းသည်ကျွန်တော်တို.အသည်းနှလုံးထဲတွင်အမြဲပင်စွဲထင်နေတော.မည်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြရင်း အပိုင်း (၇) အထိရေးလာခဲ.သော ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှအစ်ကိုကြီးများစာမူကိုဤမှာပင်နိဂုံးကမ္မတ်အဆုံးသတ်လိုက်ရပေသည် ။အခါအခွင်.သင်.ပါကဤစာမူသည်ပုံနှိပ်စာလုံးများအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ။စောင်.ဆိုင်းဖတ်ရှုအားပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
ဧဒင်ဦး..(စားသောက်ဖွယ်ရာအရောင်းဆိုင်)...မိတ်ဆွေများ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ စားသောက်နိုင်မည့်နေရာလေးတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်...ဧဒင်ဦးမိသားစု မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏
မိတ်ဆွေများ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ စားသောက်နိုင်မည့်နေရာလေးတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်
ဧဒင်ဦး မှရရှိနိုင်သော စားသောက်ဖွယ်ရာများ...
မိသားစု စားဝိုင်းလည်းပါရှိပါတယ်..စိတ်အေးချမ်းသာစွာစားသုံးချင်သူများအတွက် ဧဒင်ဦး ရှိပါတယ်.. အရက်(သေစာ)လုံးဝ(လုံးဝ)မရောင်းပါ...ဒါ့ကြောင့် စိတ်အေးချမ်းသားစွာစားသုံးချင်သူတိုင်းအတွက် ဧဒင်ဦး...
ဆက်သွယ်ရန်..09 537 04 15....နှင့်....09 423 73 48 76..ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်..
ဧဒင်ဦးမိသားစု မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏
ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှအစ်ကိုကြီးများ (၆) သရ၀ဏ်(ပြည်)
ကျွန်တော် မှတ်မိနေသည်မှာ ကျွန်တော်. အစ်မနီလာဆွေနှင်.ယောက်ဖ ကိုဝင်းမြင်. (၀င်းမင်းထွေး )၏အိမ်တွင် ဘုရားစင်မရှိ ၊ နတ်စင်မရှိချေ ။ ကိုဝင်းမြင်.မှာ ကျောင်းသားဘ၀ကပင် နိုင်ငံရေးစာပေများဖတ်ရှုပြီးလက်ဝဲဆန်လာရာ ကျွန်တော်.အစ်မနှင်.အိမ်ထောင်ဦးကာလများတွင် သူသည်ရုပ်ဝါဒီတစ်ဦးအဖြစ်သာရှိနေခဲ.ဟန်တူပေသည် ။ သူ၏တပည်.ချစ်ကောင်းဆိုသောနာမည်သည်ပင်လျင် မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ ဗိုလ်မှူးချစ်ကောင်းဆိုသူ၏အမည်နှင်.ဆင်တူနေပေသည် ။၀င်းမင်းထွေးရေးသောသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်. “ အပြင်လူ “ ဟူသည်.သီချင်းတွင်ပါဝင်သော
ဟူသောစာသားများမှာကွန်မြူနစ်ပါတီမှ တပ်နီလူငယ်တို.၏ ဆောင်ပုဒ်နှင်.တူနေသလိုရှိသည် ။
သူတို.ငှားရမ်းနေထိုင်ဲ.သော တောင်ဥက္ကလာရေကန်ကြီးအနီးနေအိမ်တွင်လည်းကောင်း ၊ မြင်သာအိမ်တွင်သော်လည်းကောင်း ၊ပြည်မြို. ကိုးသောင်းရပ်တွင်ငှားရမ်းနေထိုင်စဉ်အတွင်းတွင်လည်းကောင်း ။အိမ်၌ဘုရားကျောင်းဆောင် မရှိခဲ.ချေ ။ ကျွန်တော်.အစ်မသည်လည်းကောင်း ၊ကျွန်တော်.မိဘများသည်လည်းကောင်း ဗုဒ္စဘာသာဝင်များဖြစ်သော်လည်းထိုကိစ္စနှင်.ပါတ်သက်၍ဘာမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဝေဖန်မှုမလုပ်ခဲ.ပါ ။ သို.သော် အရာရာသည် တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပါတော.သည် ။ တစ်နေ.တွင်ချောင်းဝဆရာတော်ဘုရားကြီး၏မွေးနေ.တွင် အဆိုတော်ချစ်ကောင်း သွားရောက်ဖျော်ဖြေရာ ဆရာတော်သည် လာရောက်သီဆိုပေးသော အနုပညာရှင်များကို ဓမ္မဒါန ဘုရားမဲဖောက်ပေးခဲ.၏ ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင်ချစ်ကောင်းသည် ဘုရားတစ်ဆူမဲပေါက်ခဲ.၏ ။ သို.သော်ချစ်ကောင်းမှာ ဗုဒ္စဘာသာဝင်တစ်ယောက်မဟုတ်သဖြင်.ထိုဘုရားကို သူ၏ဆရာဖြစ်သော ၀င်းမင်းထွေးအား ဆရာပဲယူသွားလိုက်ပါဆိုပြီး ထပ်ဆင်.လက်ဆောင်ပေးသွားပြန်သည် ။ ၀င်းမင်းထွေးလည်းတပည်.ကိုအားနာသဖြင်.တစ်ထွာခန်.ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကလေးကို အိမ်သို.ပင်.ဆောင်လာခဲ.၏ ။
အိမ်သို.ရောက်သောအခါကျွန်တော်.အစ်မကိုပေးသဖြင်.အစ်မကမြင်.မြတ်သောနေရာတစ်ခုတွင် တင်ထားကိုးကွယ်လိုက်လေသည် ။ ထိုဘုရားအိမ်သို.ရောက်လာသည်.နေ.ကစ၍ ၀င်းမင်းထွေးသည် ဗုဒ္စဘာသာကို တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်စားလာပုံရသည် ။ ယုံကြည်လာပုံလည်းရသည် ။ တဖြည်းဖြည်းနှင်.သူတို.အိမ်တွင်ဘုရားကျောင်းဆောင်တစ်ခုဖြစ်လာသည် ။ လက်အုပ်ချီ၍ဘုရားကန်တော.တာတွေဘာတွေမြင်လာရစပြုသည် ။ နောက်ပိုင်းတွင် ၀င်းမင်းထွေးသည် ကျွန်တော်တို. မိရိုးဖလာဗုဒ္စဘာသာ သမားများကိုကျော်လွန်ကာ အလွန်ပင်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောဗုဒ္စဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာသည် ။ ရန်ကုန်မြို.တွင် သူမရောက်ဖူး မ၀င်ဖူးသောဝိပသနာတရားစခန်းဟူ၍မရှိသလောက်ဖြစ်လာသည် ။ ဆရာကြီးဦးဘခင်၏ငွေစာရင်းမင်းကြီးတရားရိပ်သာ ( IMC ) ၊ ဆရာကြီးဦးဂိုအင်ဂါ၏၀ိပသနာတရားရိပ်သာများတွင် ဆယ်ရက်စခန်းမကြာမကြာဝင်သည် ။ ပြည်မြို.မှကျွန်တော်.မ်ိခင်ကြီးကိုပင်ရန်ကုန်သို.ဖိတ်ခေါ်ကာ ဦးဘခင်ရိပ်သာတွင် တရားစခန်းဝင်ဖို.နှစ်တိုင်းစီစဉ်ပေးသည် ။ သူရေးသောသီချင်းတွေမှာလည်းစာသားတွေသည် တရားသံတွေပါလာ၏ ။
ငါဆုပ်ကိုင်လဲ ဘယ်မလဲ ဘယ်အရာကိုသိမ်းပိုက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ.သလဲ
( ဇော်ဝင်းထွဋ် ၊ အရိပ်ရဲ.အရိပ်များ ) ။
ကိုဝင်းမြင်.ဘ၀မှာရော ၀င်းမင်းထွေးဘ၀မှာရော သူသည် စိတ်ကောင်းရှိသည် ။သို.သော် အပြောဆိုးသည် ဟုနာမည်ကြီးသည် ။ သူသည်ခေါင်းဆောင်စိတ်ရှိသည် ။အနုပညာမာနကြီးသည် ။ လူတစ်ဖက်သားနားဝင်အောင်ချိုချိုသာသာမပြောတတ် ။ပိသလေးနှင်.ဘေးထုသလိုပြောတတ်သည် ။ သူ၏မိခင်နှင်.ပင် သိပ်ပြီးချိုချိုသာသာမပြောတတ် ။ သူစကားပြောလျင် လူတွေကိုတစ်ခါတစ်ရံအော်ငေါက်နေသလိုထင်ရသည် ။ ထို.ကြောင်.အကြောင်းမသိသူတွေကသူ.ကိုလန်.ကြသည် ။ သို.သော်စိတ်ရင်းကောင်းပါသည် ။ ဂီတလောကတွင်ခိုးကူးခွေများစတင်ပေါ်ထွန်းလာကာစက ဤပြသနာသည်တစ်နေ.နေ.တွင်ဂီတလောကဈေးကွက်ပျက်သည်အထိဖြစ်လိမ်.မည်ဟုသူသိသောကြောင်. အားလုံးကိုအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးခိုးကူးခွေဆန်.ကျင်ရေးကိစ္စဖိဖိစီးစီးဝိင်းလုပ်ကြဖို. ဦးဆောင်တိုက်တွန်းသည် ။ ထိုစဉ်ကဂီတအစည်းအရုံး ဥက္ကဌမှာအကော်ဒီယံအုန်းကျော်ဖြစ်သည် ။ ဦးအုန်းကျော်၏ဆောင်ရွက်မှုများကိုသူသိပ်အားမရ ။ထို.ကြောင်.ခိုးကူးခွေတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် သူ.မိတ်ဆွေဂီတသမားများ ၊အဆိုတော်များကိုဖိတ်ကာ သီးသန်.အစည်းအဝေးထိုင်သည် ။ ထိုကိစ္စကိုအမြင်မကြည်လင်သူများက ၀င်းမင်းထွေးဂီတအစည်းအရုံးကိုစင်ပြိုင်ထောင်နေသည်ဟု ဥက္ကဌအကော်ဒီယံအုန်းကျော်ကိုသွားအတို.အထောင်လုပ်သည် ။ သေသေချာချာမစုံစမ်းသော အကော်ဒီယံအုန်းကျော်က ဂီတအစည်းအ၇ုံးဥက္ကဌဆိုသောလုပ်ပိုင်ခွင်.ကိုသုံးကာ ၀င်းမင်းထွေးကိုသီချင်းရေးခွင်.နှစ်အကန်.အသတ်မရှိပိတ်ပင်လိုက်သည် ။
မာနကြီးသောဝင်းမင်းထွေးသည် အကော်ဒီယံအုန်းကျော်ကိုသွာလဲမတွေ. ၊သွား၍လဲရှင်းမပြ ။တောင်းလဲမတောင်းပန်ပဲ ပေခံခဲ.သည် ။ ထိုကာလသည် စတီရီယိုဂီတလောကတွင် ဈေးကွက်အကောင်းဆုံး နှစ်များဖြစ်သည် ။ တေးထုတ်လုပ်ရေးများမှ ပြန်ဆိုတေးများဟောတစ်ခွေဟောတစ်ခွေ ထုတ်နေသောကာလဖြစ်သည် ။ခိုးကူးခွေလောကသည် ယနေ.ခေတ်လောက်မကျယ်ပြန်.သေး ။ဂီတလောက အသက်မထွက်မီ နောက်ဆုံးတောက်ပနေသောရွှေရောင်ကာလများဖြစ်သည် ။ထိုခေတ်ကောင်းကြီးတွင် နာမည်ကြီးတေးရေးဆရာများလက်မလည်အောင်သီချင်းတွေရောင်းနေရသော်လည်း ၀င်းမင်းထွေးမှာ ဂီတအစည်းအရုံးနှင်.စာပေစိစစ်ရေး ပူးပေါင်းနှိပ်ကွက်မှု ကြောင်.ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရသောကာလဖြစ်သည် ။ ထိုအခါ ၀င်းမင်းထွေး၏မိတ်ဆွေများဖြစ်သော တေးရေးမောင်သစ်မင်း၊ နှင်.အခြားမိတ်ဆွေများက သူ.ကိုကူညီကြသည် ။ ကူညီပုံမှာ တေးသီချင်းခွေများ ပြန်ဆိုတေးများခွေထုတ်လျင် ၀င်းမင်းထွေး၏သီချင်းတစ်ပုဒ် နှစ်ပုဒ်ကို စီးရီးခွေထဲမှာထည်.သွင်းသီဆိုစေသည် ။ ကိုယ်.မိတ်ဆွေဝင်ငွေရစေချင်သောကြောင်.ဖြစ်သည် ။တေးရေးခကိုဝင်းမင်းထွေးကိုပေါက်ဈေးအတိုင်းရှင်းပေးသည် ။သို.သော်စာပေစိစစ်ရေးကိုမျက်လှည်.ပြရန် တေးရေးနေရာတွင် မောင်သစ်မင်းဟုအမည်တပ်လိုက်ရသည် ။ ထိုကာလများတွင် တေးရေးဝင်းမင်းထွေး၏ နာမည်ကြီးသီချင်းအချို.သည် တေးရေးမောင်သစ်မင်းအမည်ဖြင်.မကြာခနထွက်လာသည် ။ဥပမာ ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်သီဆိုနာမည်ကြီးခဲ.ပြီးဟေမာနေ၀င်း ၊ ထူးအိမ်သင်တို.ပြန်ဆိုခဲ.သော ပထမဆုံးအသည်းကွဲဇာတ်လမ်းဟူသည်.သီချင်း
ဤသည်မှာနမူနာတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်နုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ထိုသီချင်းမျိုးများစွာ အသုံးပြုခဲ.ပါသည် ။သီချင်းအသစ်တော.ရေးမပေး ။သီချင်းအဟောင်းများကိုသာ မောင်သစ်မင်းနာမည်နှင်. ရောင်းခြင်းဖြစ်သည် ။သီချင်းစာအုပ်မှာရော VCD မှာရော တေးရေးမောင်သစ်မင်းဟု စာထိုးရသည် ။ကိုသစ်မင်းသည်ကြားမှဘာပွဲစားခမှမယူ ၀င်းမင်းထွေးကိုသက်သက်မဲ.ကူညီခြင်းဖြစ်သည် ။ ပရိသတ်ကမသိသော် လည်း ဂီတလောကသားခြင်းကတော. ဒါဘယ်သူ.သီချင်းဆိုတာခွဲပြီးသိကြသည် ။ထိုစဉ်ကကျွန်တော် နှုတ်မှဖွင်.မပြောသော်လည်းစိတ်ပူနေတာတစ်ခုရှိသည် ။အကယ်၍များ ကျွန်တော်.ယောက်ဖရော မောင်သစ်မင်းရောတပြိုင်နက်ကွယ်လွန်သွားကြလျင် နောင်သောအခါ သီချင်းမူပိုင်ခွင်.တွေရှင်းမရအောင်ရှုပ်ကုန်တော.မည်.အရေးကိုတွေးမိခြင်းဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်တွေးခဲ.သလိုပင် မောင်သစ်မင်းသည်ယခုအခါကွယ်လွန်သွားခဲ.ပြီဖြစ်သည် ။ သို.သော် ကံကောင်းထောက်မစွာပင် အချိန်ကာလတစ်ခုတွင် အကော်ဒီယံအုန်းကျော်သည် ဂီတအစည်းအရုံးရာထူးမှ လျောကျသွားပါသည် ။သူ.နေရာတွင် ယုဇနတို. ၊ဖြိုးကြီးတို.၏ ဖခင် ဟင်္သာတမြင်.ငွေတက်လာသည် ။ကျွန်တော်.ယောက်ဖအပေါ်ချမှတ်ထားသော သီချင်းမရေးရအမိန်.လည်းပျက်ပြယ်သွားသည် ။ အားလုံးသည်အခြေအနေပြန်ကောင်းသွား၏ ။သို.သော် သူစိုးရိမ်တကြီးသတိပေးခဲ.သော ခိုးကူးခွေပြသနာမှာတစတစနှင်.အတော်ကြီးလောင်မြိုက်နေသောအခြေရောက်ခဲ.လေပြီ ။ တေးသံသွင်းဆိုင်များ စီးရီးခွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအရှုံးပေါ်သည် ။ အလွန်အောင်မြင်သောစီးရီးပင် အရင်းပြန်ရဖို.အနိုင်နိုင်ဖြစ်လာသည် ။ တေးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြိုလဲသည် ။ယနေ.ခေတ်တွင် တေးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမရှိသလောက်နည်းပါးသွားသည် ။ခိုးကူးသည်တရားဝင်သဖွယ်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုကြီးစိုးသွား၏ ။
၀င်းမင်းထွေးသည်သူဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကိုသိုဝှက်ထားတတ်သူမဟုတ် အင်တာဗျူးများတွင်အိပ်သွန်ဖာမှောက်အကုန်ပြောခဲ.ပြီးဖြစ်သည် ။ထိုမျှမကသေး သူ.ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူ ဟူသည်.အမည်ဖြင်. လုံးချင်းစာအုပ်အသေးလေးတစ်အုပ်ပင်ထုတ်လိုက်သေးသည် ။ ထို.ကြောင်.သူ.အကြောင်းမှာများများစားစားရေးကွက်မရှိတော.ပေ ။ သူ.တွင် သားသမီးသုံးဦးရှိ ၏ ။အကြီးဆုံးသားကြီးမှာ အာကာဝင်းမင်းထွေးဖြစ်သည် ။ အာကာသည် ဂီတ၀ါသနာပါ၏ ဟစ်ဟော.သီချင်းများကို ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင်ဆိုသေးသည် ။သူ.သူငယ်ချင်းများနှင်. D.N.A ဆိုသော ဟစ်ဟော.ဂီတအဖွဲ.လေးကိုပင် ဖွဲ.ထားသည် ။ သူ.ဘာသာပိုက်ဆံစု၍ စီးရီးတစ်ခွေ အသံသွင်းသည် ။ ပိုက်ဆံနည်းနည်းရှိသည်နှင်.အသံဖမ်းစတူဒီယိုသို.သွားကာ သီချင်းတစ်ပုဒ်သွားသွင်းတတ်သည် ။နောက်ဆုံး၍ စီးရီးတစ်ခွေစာရ၏ ။ သူ.ခွေကိုတေးသံသွင်းဆိုင်တစ်ခုက၀ယ်သည် ။ VCD ပင်ရိုက်သေးသည် ။သို.သော် ဂီတလောကဈေးကွက်ပျက်နေသဖြင်. တရားဝင်မထုတ်ဖြစ်ချေ ။ သူလည်းစိတ်ဓါတ်ကျကာ စင်္ကာပူသို.ထွက်သွားသည် ။သူကျွမ်းကျင်သောကွန်ပျူတာဆော.၀ဲလ်ပညာဖြင်. Singapore Management University ( SMU ) တွင်ပညာရှင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေသည် ။ ဒုတိယကလေးသည် သမီးဖြစ်သည် ။ ဘရဏီဝင်းမင်းထွေးဟုအမည်ရ၏ ။သူက ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှ ဂျပန်ဘာသာအဓိကဖြင်.ဘွဲ.ရပြီး ဂျပန်တွင်ကျောင်းဆက်တက်ရင်းအလုပ်လုပ်နေသည် ။သူက ၀တ္တုလေးတွေဘာသာပြန်ရတာဝါသနာပါသည် ။ဂျပန်ဝတ္တုတိုလေးတွေကိုဘာသာပြန်ပြီးကျွန်တော်.ကိုပြတတ်သည် ။ အငယ်ဆုံးသမီးမှာ ၀င်းမင်းရွှေရင်အေးဖြစ်သည် ။ သူ.ကိုအိမ်တွင် ရွှေရင်အေးဟုပဲခေါ်သည် ။ သူမွေးလာသောအခါ ၀င်းမင်းထွေးက မေဆွိသီဆိုရန် သမီးနာမည်ပါသောသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရေးသည် ။
သောကတွေပြေစေဦးမယ်ရွှေရင်အေး ကိုကိုပေါ. ကိုကိုရယ်
ရွှေရင်အေးကိုကိုပေါ.ကိုကိုရယ် …ရွှေရင်အေးအချစ် ရွှေရင်အေး”
ရွှေရင်အေးသည် သူ.နာမည်ကိုမကြိုက်။ ထို.ကြောင်.သူ.ဘာသာ ရွှေရည်ဧပရယ်လ်ဆိုပြီးအမည်ပြောင်းပစ်သည် ။ သူကသီချင်းဆိုရတာဝါသနာပါသည် ။ မော်ဒယ်လျောက်ရတာဝါသနာပါသည် ။အနုပညာလမ်းကိုသူပဲသည်းကြီးမည်းကြီးလျောက်လှမ်းနေလေသည် ။ ဤစာကိုရေးချိန်တွင်ကျွန်တော်.ယောက်ဖသည်တရားစခန်းဝင်နေ၏ ။ သူက တရားစခန်းများကိုပဲ ဆက်တိုက်ဝင်နေသည် ။ နောင်တွင်ဘုန်းကြီးဖြစ်မလားမသိ ။ သူရေးသောသီချင်းနှင်.ပင်သူ.အကြောင်းပိတ်ရမည်။
ကျွန်တော်စာရေးသက် (၂၅)နှစ်ပြည်.ကာမှ ကျွန်တော်.ယောက်ဖများအကြောင်းရေးရသည်မှာအကြောင်းရှိသည် ။ ကျွန်တော်သည် အစ်မကြီးမာလာဝေနှင်.ပါတ်သက်၍သုခမိန်လှိုင်နှင်.သမီးယောက်ဖတော်ခဲ.သည်.အကြောင်းကိုရော ၀င်းမင်းထွေးသည်ကျွန်တော်.အစ်မ နံပါတ်(၂) ၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သည်ကိုရော မည်သူ.ကိုမျှစတင်ပြီးမပြောခဲ.ပါ ။ ပြောလေ.ပြောထမရှိပါ ။ သူတို.နှင်.ပြသနာရှိ၍မဟုတ် ကိုယ်.ခံယူချက်နှင်.ကိုယ်ဖြစ်သည် ။ကျွန်တော်စာပေနယ်သို.၀င်ကာစက သူတို.နှစ်ယောက်သည် လျမ်းလျမ်းတောက်ကျော်ကြားနေကြပြီ ။သူတို.လောင်းရိပ်သည်ကျွန်တော်.ကိုပိသလိုဖြစ်နေသည် ။ ကျွန်တော်.ကိုမိတ်ဆက်ပေးရာတွင်ပင် ဒါသုခမိန်လှိုင်ရဲ.ယောက်ဖလေ ဟုတစ်မျိုး သူက ၀င်းမင်းထွေးရဲ.ညီပေါ. သူ.အစ်မက ကိုထွေးဇနီးပေါ. ဟူ၍ တစ်ဖုံမိတ်ဆက်ပေးကြသည်များကိုခံခဲ.ရသည် ။ ကျွန်တော်သည်ဘယ်သူဘယ်ဝါ၏ ညီပါဟု ပြောဆိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းကိုခံချင်သူမဟုတ် ။ သူတို.အရှိန်အ၀ါကိုမှီပြီးတက်ချင်သူမဟုတ် ။ကိုယ်.အားကိုယ်ကိုးချင်သူဖြစ်သည် ။ ဒါသရ၀ဏ်.ယောက်ဖလေ ဟုမိတ်ဆက်ပေးတာကိုသာခံချင်သူဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင်.စာပေလောကသို.၀င်ရာတွင် ကျွန်တော်.ယောက်ဖ၀င်းမင်းထွေးထုတ်ဝေခဲ.သောဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်းမှာပင် စာမူတစ်ခါမှမပို.ဖူးခဲ. ။ ကိုဝင်းမင်းထွေးမဂ္ဂဇင်းကို ၊ ကိုတင်ကိုအောင်အားလွဲပြောင်းရောင်းချပြီးနောက်မှသာ ကဗျာများ ၊၀တ္တုတိုများရေးသားပေးပို.ရာပုံနှိပ်ဖော်ပြခံခဲ.ရသည် ။ ကျွန်တော်သည်စာပေလောကကိုဘယ်တုန်းကမှ နောက်ပေါက်ကမ၀င်ခဲ. ။ ကျွန်တော်.စာမူလေးပို.ပေးပါဟုဆိုကာ နိုင်ငံကျော်ယောက်ဖများအားလည်းတစ်ခါမှအကူအညီမတောင်းဖူးခဲ. ။ ထိုအတွက်လိပ်ပြာသန်.ပါသည် ။
စာရေးကာစကကျွန်တော်.ကို သုခမိန်လှိင်၏ယောက်ဖ ၊၀င်းမင်းထွေး၏ယောက်ဖဟုလူတွေကမိတ်ဆက်ပေးတာမကြာခနကြုံရတော.ကျွန်တော်မကြေနပ် ။ဘာမှလည်းမတတ်နိုင် ။ထို.ကြောင်.အောက်ပါကဗျာကို ရုပ်ရှင်တေးကဗျာမဂ္ဂဇင်းသို.ပို.လိုက်ရာပါလာသည် ။
ဘေလ်ဂိတ်ရဲ.ကျောင်းနေဘက်လို. ငါ.ကိုမိတ်ဆက်မပေးနဲ. ။
ငါလို. ကဗ္မည်းထိုးလိုက်ရင် ရပါပြီ ။
၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာရုပ်ရှင်တေးကဗျာ ။
ပဲခူးတိုင်းအနောက်ပိုင်း၊ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဘေးတွင်တည်ရှိသော ပန်းတောင်းမြို့ရှိ မြစ်ကမ်းပါးပြိုကျမှုမှာ တဖြည်းဖြည်းဆိုးဝါးလာပြီး ပန်းတောင်း-ဥသျှစ်ကားလမ်းနှင့်(၁)ပေခန့်အကွာသို့ ရောက်ရှိနေသဖြင့် ဒေသခံများ စိုးရိမ်နေကြောင်း သိရသည်။
“အဓိကတော့ ဒီကမ်းပါးအထက်နားမှာလာပြီး ကျောက်စရစ်စုပ်တဲ့ မော်တော်တွေကြောင့် ရေလမ်းကြောင်း ပြောင်းပြီး ရေစူးက ဒီဘက်ထိုးလာတော့ မြစ်ကမ်းပါးတွေက ပိုပြီးတော့ ပြိုလာတာ။ ရေကထပ်တက်လာမယ် ဆိုရင်တော့ ကားလမ်းပါ ပြိုသွားနိုင်တယ်။ ကမ်းပါးပြိုတာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ခိုင်မာတဲ့ ကျောက်စီနံရံတစ်ခုတော့ လုပ်ပေးစေချင်တယ်”ဟု စည်သာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအုန်းကျော်က ပြောသည်။
ကမ်းပါးပြိုကျမှုသည် မြစ်ကမ်းပါးအနီးရှိ ရပ်ကွက်တချို့မှ နေအိမ်များ ရွှေ့ပြောင်းနေရပြီး ပန်းတောင်း -ဥသျှစ် ကားလမ်းအပြင် အဆိုပါ ကားလမ်းပေါ်ရှိ ဒီးဒုတ်ချောင်းတံတားအနီးသို့ပါ တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာသော ကြောင့် တံးတားကျိုးပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြတ်တောက်မည့် အခြေအနေကို စိုးရိမ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
“ကမ်းပါးက တစ်အိအိနဲ့ပြိုကျတာ။ အိမ်ကိုဆွဲဖျက်ပြီး ကလေးတွေအရင်ပြေးခိုင်းရတယ်။ နေစရာမရှိတော့ အမျိုးအိမ်မှာကပ်နေရတာ။ ပြီးတော့ လူကြီးတွေက သစ်တောရုံးဝင်းထဲမှာနေရာပြန်လုပ်ပေးတယ်။ အဲဒါလည်း သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်မုန်းလောက်ဆို ပြန်ဖယ်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။”ဟု မြစ်ကမ်းပါပြိုကျမှုကြောင့် နေအိမ်ပြောင်းရွှေခဲ့ရသူ ဒေါ်မိချိုက ပြောသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ပန်းတောင်းမြို့ စည်သာရပ်ကွက်တွင် မြစ်ကမ်းပါးပြိုမှုကြောင့် လူနေအိမ်များ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးသို့ ဒေသခံများက အကြိမ်ကြိမ်စာတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနက မြစ်ကမ်းပါးပြိုကျသည့် နေရာများတွင် သဲအိတ်ချခြင်းနှင့် မြစ်ကမ်းပါး ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သော်လည်း မြစ်ကမ်းပါပြိုမှုမှာ ရပ်တန့်ခြင်းမရှိသေးဟု ၎င်းကဆိုသည်။
“ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဥာဏ်ဝင်းလည်း သေချာလာကြည့်သွားတယ်။ တိုင်းဆောက်လုပ်ရေးက အင်ဂျင်နီယာလည်းပါတယ်။ တံတားကို ကျွန်တော်တို့ သေသချာချာသွားကြည့်ခဲ့တယ်။ တတ်နိုင်သမျှတော့ ကမ်းပါးကို မပဲ့ဖို့ မြေထိန်းတမံတုတ်တယ်။ မရဘူးဆိုရင်တော့ ဒုတိယအစီအစဉ်အနေနဲ့ ရေလမ်းကြောင်း ပြောင်းအောင် လုပ်မယ်လို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။”ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာခင်မောင်လေးက ပြောသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း မေလမှ စတင်ကာ ကမ်းပါးပြိုသောနေအိမ်များနှင့် ကမ်းပါးပြိုနိုင်သည့် နေရာများမှ နေအိမ် အလုံး(၃၀)ခန့်အား ဌာနဆိုင်ရာက ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
30 August 2014 By သီဟလွင် - ပြည် (မြစ်မခ)
(၁) ရေကို တစ်နေ့ ၃ လီတာ သောက်ပါက ရောဂါကင်းဝေးပြီး ကျန်းမာမည်။
(၂) သံပုရာရည်ကို တစ်နေ့တစ်ခွက်သောက်ပါက အဝလွန်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မည်။
(၃) နွားနို့ တစ်နေ့တစ်ခွက် သောက်ပါက အရိုးကျန်းမာမည်။
(၄) တစ်နေ့ပန်းသီး တစ်လုံးစားပါက အတော်အတန် ဖျားနာခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မည်။
(၅) နေ့တိုင်း ရှောက်ရွက်စားပါက လေဖြတ်ခြင်း ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်မည်။
ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှအစ်ကိုကြီးများ (၅ )
ကဲခုတော.ဘယ်.နှယ်လဲ (ဂျစ်ပစီမိုးတိမ် )
ဆန်းပြားလှတယ်အချစ်လေးရယ် (ချစ်ရမ္မက် )
အချစ်နဲ.ဆုံးနိုင်ဖွယ်ရာမမြင် ( ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူ )
ဤစကားလုံးများ၏ ပိုင်ရှင် တေးရေးဝင်းမင်းထွေး (သူ.အခေါ်စကားလုံးဝင်းမင်းထွေး) သည် ကျွန်တော်.အစ်မ နံပါတ် (၂) မနီလာဆွေ၏ခင်ပွန်းဖြစ်ပါသည် ။ ကျွန်တော်.တွင်အစ်မသုံးယောက် ညီမတစ်ယောက်ရှိရာ သူတို.နာမည်များမှာ အစဉ်အလိုက်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်
ဟူ၍ဖြစ်သည် ။ဤနာမည်များကိုကာရန်ကိုက်အောင်ဘယ်ဗေဒင်ဆရာကမှပေးထားခြင်းမဟုတ် ကျွန်တော်၏မိခင်ကြီး ဒေါ်မြင်.မြင်.က သူ.ဘာသာ ဥာဏ်ကွန်.၍ ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ သားယောက်ကျားလေးသုံးယောက်၏အမည်များကိုတော.
ဟူ၍နဘေကိုက်ပေးခဲ.သည် ။ သို.သော် ကျွန်တော်.အဖေသည် ထိုနာမည်များကိုမကြိုက်သည်လား ၊ခေါ်ရခက်၍လား ၊ ရုတ်တရက်မမှတ်မိသည်လားမသိ ကျွန်တော်တို.ကိုကျောင်းသွားအပ်သောအခါ ခပ်လွယ်လွယ်ပင် အောင်အောင် နှင်.ညီညီ ဟုပေးချလိုက်ရာ အမေကဗျာဆန်ဆန်ပေးထားသော အောင်ညီမျိုးနာမည်ပျောက်၍ ကျွန်တော်.နာမည်မှာ ညီညီ ဖြစ်လာခဲ.သည် ။ အောင်ရည်မိုးမှာလည်း အောင်အောင်ဟုသာအမည်တွင်တော.သည် ။ သို.သော် မိန်းကလေးတွေမှာတော. နာမည်လှလှကိုယ်စီရှိကြသည် ။ အနှီ နီလာဆွေအမည်ရသည်. နံပါတ်နှစ်အစ်မသည် ကိုဝင်းမြင်. (ခေါ်) တေးရေးဝင်းမင်းထွေးနှင်.အိမ်ထောင်ကျပါသည် ။ ကိုဝင်းမြင်.သည် မန္တလေးတိုင်း ၊အမရပူရမြို.နယ် ၊ရွှေကြက်ယက်ကျေးရွာမှဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်.အစ်မကပြည်မြို.သူစစ်စစ်ဖြစ်သည် ။ သူတို.နှစ်ဦးတွေ.ပုံကဤသို.ဖြစ်သည် ။ ယခင်အခန်းများတွင်ဖော်ပြခဲ.သလို ကျွန်တော်.ယောက်ဖ နံပါတ်(၁) သည် ကဗျာဆရာ သိဒ္စတ္ထ္စလှိုင်ဖြစ်သည် ။ သိဒ္စတ္ထလှိုင်သည် ကျွန်တော်.အစ်မနှင်. အိမ်ထောင်ကျပြီး ရန်ကုန်တွင် အခြေချကာစာပေလောကသို.တိုးဝင်ရင်းကဗျာများရေးသားနေသောကာလ၀ယ် ကိုဝင်းမြင်.သည် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကိုထူးချွန်စွာအောင်မြင်ကာ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်သို.တက်ရောက်ရန် ရန်ကုန်မြို.သို.ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည် ။ ထိုခေတ်ကလူငယ်များထုံးစံအတိုင်း ခေါင်းလောင်းဘောင်းဘီနှင်.ရှပ်အင်္ကျီကိုဝတ်လျက် ခြံထွက်ငှက်ပျောခိုင်ကြီးကို ပုခုံးတွင်ထမ်းလျက် ကိုဝင်းမြင်.ရန်ကုန်သို.ရောက်လာပုံကိုအစ်မတွေပြန်ပြောသဖြင်.စိတ်ထဲတွင်မြင်အောင်ကြည်.မိသည် ။ ရယ်စရာတော. ကောင်းသလိုရှိ၏ ။ယခုပုံနှင်.တော.အတော်ကွာနေပေသည်။ထားတော. ။ ကိုဝင်းမြင်.တွင်လည်းစာပေပိုးရှိသည် ။ ၀င်းမင်းထွေးကလောင်အမည်ဖြင်. ကဗျာများကို စတင်စမ်းသပ်ရေးဖွဲ.နေသောကာလဖြစ်သည် ။ထို.ကြောင်.ရန်ကုန်သို.စက်မှုတက္ကသိုလ် ( R.I.T ) ကျောင်းသားအဖြစ်ရောက်ရှိလာသောအခါ စာပေ၀ါသနာပါသူချင်းပေါင်းသင်းမိကြရာမှ သိဒ္စတ္ထလှိုင် ၏ အိမ်သို.အ၀င်အထွက်ရှိခဲ.သည် ။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်တော်. နံပါတ်(၂) အစ်မ နီလာဆွေသည် နံပါတ်(၁) အစ်မကြီး မာလာဝေ ရှိရာသို.ခေတ္တလာရောက်နေထိုင်နေသော ကာလဖြစ်သည် ။ တိုတိုပြောရလျင် သိဒ္စတ္ထလှိုင် (နောင်တွင်သုခမိန်လှိုင် ) ကိုဗဟိုပြုကာ ကျွန်တော်.အစ်မ နီလာဆွေနှင်. ကိုဝင်းမြင်. (ခေါ်)၀င်းမင်းထွေးတို.တွေ.ဆုံ မေတ္တာမျှခဲ.ခြင်းဖြစ်သည် ။
နည်းမှန်လမ်းမှန်အတိုင်းဆိုလျင် ကိုဝင်းမြင်.သည် နောက်ခြောက်နှစ်ကြာလျင် အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မည်ဖြစ်သည် ။ထိုအခါ အရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်မည်။ပြီးတော.သူတို.လက်ထပ်လိုက်ကြမည် ။ သို.သော်လောကကြီးသည် ဘယ်တော.မှ လူတို.ခန်.မှန်းတွက်ချက်သည်.အတိုင်းတသဝေမတိမ်းဖြစ်နေသည်မဟုတ်ချေ ။ နိုင်ငံရေးတွင်တက်ကြွသော ကျွန်တော်.ယောက်ဖလောင်း ကိုဝင်းမြင်.သည် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း မွေးနေ. နှစ် (၁၀၀ )ပြည်.အခမ်းနားပွဲဖြစ်သည်. မှိုင်းရာပြည်.အရေးတော်ပုံတွင်ပါဝင်ခဲ.သဖြင်. ထောက်လှမ်းရေး၏ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းကိုခံရပေ၏ ။ ဘွဲ.နှင်းသဘင်သို.ဦးတည်လျောက်လှမ်းခဲ.သောလူငယ်တစ်ယောက်၏ နာဂါတ်မှာ အင်းစိန်နရသိန်တွင် နှစ်ရှည်လများ နိဂုံးချုပ်ရပေတော.၏ ။
ကိုဝင်းမြင်.နှင်.ချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ဝက်တစ်ပျက်ဖြင်.အိပ်မက်မှလန်.နိုးသလိုရှိလာသောကျွန်တော်.အစ်မသည်မိဘများရှိရာ ပြည်မြို.သို.ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ၏ ။ ထို.နောက်အစ်မသည်ရွှေတောင်ချည်မျှင်နှင်.အထည်စက်ရုံတွင် ၀န်ထမ်းအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်၏ ။ တစ်နေ.တွင် ပြည်မြို.တစ်ဖက်ကမ်း ရွာတစ်ရွာတွင် တွဲဘက်ကျောင်းဆရာမတစ်ဦး အလိုရှိကြောင်း ကြော်ငြာကပ်ထားသည်ကို တွေ.ရှိရာမှ အစ်မကသွားရောက်လျောက်ထားရာ အလုပ်ခန်.ခြင်းခံရသဖြင်. ထိုကျေးရွာသို.တစ်ဦးတည်းသွားရောက်နေထိုင်ရင်းကျောင်းဆရာမအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေခဲ.သည် ။ နှစ်များစွာကုန်လွန်သွားလေသည် ။ တစ်နေ.တွင်မြန်မာ.နိုင်ငံရေး၌ ထူးခြားသောအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ.၏ ။၎င်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဗုဒ္စဘာသာ ဂိုဏ်းကွဲများသည် အကြေအလည်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး ဂိုဏ်းပေါင်းစုံသံဃအစည်းအဝေးပွဲကြီးကျင်းပကာ ညီညွတ်ရေးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ.၏ ။ ထိုဂိုဏ်းပေါင်းစုံသံဃညီညွတ်ရေးအထိန်းအမှတ်အဖြစ် မြန်မာ.ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဌကြီးဦးနေ၀င်းက တစ်နိုင်ငံလုံးရှိအကျဉ်းသားများကို အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင်.ကြေငြာလေရာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်သောကိုဝင်းမြင်.လည်းပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ.၏ ။ ကိုဝင်းမြင်.သည်အင်းစိန်တောရမှ လွတ်မြောက်လာလာခြင်းပင် စုံစမ်း၍ ပြည်မြို.သို.လိုက်လာ၏ ။ ကျွန်တော်တို.အိမ်သို.ရောက်လာသောအခါ မိဘများကလမ်းညွှန်လိုက်သောကြောင်. အစ်မဆရာမလုပ်နေသောရွာကလေးသို.မဆိုင်းမတွ လိုက်သွားတော.၏ ။ ရွာတွင်သူတို.နှစ်ယောက်ပြန်ဆုံသည် ။ နှစ်ဦးသဘောတူအိမ်ထောင်တစ်ခုကိုတည်ထောင်သည် ။ အစ်မသည် အလုပ်ထွက်၍ ကိုဝင်းမြင်.နှင်.ရန်ကုန်သို.လိုက်သွား၏ ။
ထိုအချိန်တွင်ရန်ကုန်၌ သိဒ္စိတ္ထလှိုင်သည် ကော်ပီတေးရေးဆရာတစ်ယောက်အနေနှင်.အလွန်အောင်မြင်နေ၏ ။ ကိုဝင်းမြင်.သည် မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်သောသိဒ္စတ္ထလှိုင်ဆီသို.သွားကာ သူလည်းကော်ပီသီချင်းများရေးချင်သဖြင်. အဆိုတော်များနှင်.ဆက်သွယ်ပေးဖို.အကူအညီတောင်းသည်ကို သိဒ္စတ္ထလှိုင်ကငြင်းလိုက်သည် ။ သို.သော်ကံကောင်းထောက်မစွာပင်အဆိုတော်မင်းမင်းလတ်က ကိုဝင်းမြင်.ကို အဆိုတော် ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်နှင်.မိတ်ဆက်ပေးသည် ။ ထိုအချိန်တွင် ကံကြမ္မာ၏မျက်သာပေးမှုကိုကြံကြံဖန်ဖန်ကြုံရသည် မှာ ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်သည် နောက်ထွက်မည်.သူ၏စီးရီးခွေအတွက် သီချင်းများစုဆောင်းရာ ကက်ဆက်ခွေတစ်ခြမ်းစာပဲရပြီး ကက်ဆက်ခွေတစ်ခြမ်းစာ သီချင်းများကြံကြံဖန်ဖန်လိုနေသည် ။ ကိုဝင်းမြင်.ကရွှေကြက်ယက်ခြံထဲတွင်သူကြိတ်ရေးထားသော ချစ်ရမ္မက်ဆိုသည်.သီချင်းစာသားလေးကိုပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်ကိုပြသည် ။သီချင်းတစ်ပုဒ်မှမထွက်ဖူးသေးသော ကိုဝင်းမြင်.လက်ရာကို ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်သဘောကျသွားကာချက်ခြင်း အလုပ်အပ်လိုက်သည် ။ တေးရေးဆရာအမည်ကိုတော.ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားမနေပဲ ကဗျာရေးစဉ်ကကလောင်အမည်ဝင်းမင်းထွေးဟုပင်အမည်ပေးလိုက်သည် ။ ထွေးဟူသည်မှာ သူ.ဖခင်ဦးခင်မောင်ထွေး၏ နောက်ဆုံးနာမည်ဖြစ်သဖြင်.အမှတ်တရထည်.လိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။သီချင်းများရေးပြီးသောအခါ ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်ကအလွန်ကြိုက်သဖြင်. တေးစီးရီးခေါင်းစဉ် ( Title Song )ကိုပင် ချစ်ရမ္မက် ဟုအမည်ပေးခဲ.သည် ။ ထိုစီးရီးခွေထဲမှချစ်ရမ္မက်ဟူသောသီချင်းနှင်. လေယာဉ်ခရီးစဉ်အမှတ် UB 403 သည်အလွန်ရေပန်းစားခဲ.သည်။
အချိန်မှန်တဲ.ဖလိုက် ယူဘီ 403
ထိုစီးရီးသည် လူကြိုက်များခဲ.ပြီးဂီတလောကတွင် ၀င်းမင်းထွေးဆိုသောတေးရေးဆရာကိုသတိထားမိသွားသည် ။ နောက်တော.ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင် နှင်.၀င်းမင်းထွေးသည်အတွဲတွဲညီညီ သီချင်းခွေများတစ်ခွေပြီးတစ်ခွေထွက်တော.သည် ။
တစ်နေ.တွင်ကျွန်တော်သည်နွေကျောင်းပိတ်ရက်တစ်ခုဝယ် ရန်ကုန်တောင်ဥက္ကလာမြင်သာရပ်ကွက်ရှိ ကျွန်တော်.အစ်မ နီလာဆွေ နှင်.၀င်းမင်းထွေးတို.အိမ်သို.ရောက်နေ၏ ။ ၁၉၈၇ ခုမတ်လထဲမှာဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းဖြေထားကာစဖြစ်သည် ။ ၀င်းမင်းထွေးသည်တေးရေးဆရာလောကတွင်နာမည်ရကာစဖြစ်သည် ။ သိပ်တော.အရမ်းနာမည်မကြီးသေး ။ အိမ်ခန်းလေးတစ်ခန်းငှားနေရသည် ။ တစ်နေ.တွင်နံနက်စောစောအိမ်သို. လူတစ်ယောက်ယောက်လာ၏ ။ သူ၏အသားမှာအတော်မည်းသည် ။စီးလာသောကားမှာ ဘောက်(စ်)၀က်ဂွန်အစိမ်းေ၇ာင်တောက်တောက်ဖြစ်သည် ။သူကကျွန်တော်.ယောက်ဖကို ဆရာဆရာနှင်.ခေါ်သည် ။ကျွန်တော်.ယောက်ဖကိုအတော်လေးစားသည် ။ လူကမည်းမည်း ကားကစိမ်းစိမ်း အသက်အစိတ်ခန်.လူတစ်ယောက်နှင်.ယောက်ဖတော်ဝင်းမင်းထွေးသည် အတူလိုက်ပါသွား၏ ။ သူတို.ထွက်သွားမှအစ်မကိုကျွန်တော်ကမေးရသည် ။
နေပါဦး သူက ဘယ်သူတုန်းဟ
အင်းနာမည်ကလဲခပ်ရိုးရိုး လူပုံကလဲ ကုလားလိုလို ဘာလိုလို နှင်.ဆိုတော.ဒီလူသည် ဘာသီချင်းတွေဆိုမှာပါလိမ်.ဆိုတော.အစ်မက ထိုကောင်လေး၏သွင်းလက်စ သီချင်းခွေကြမ်းကိုကျွန်တော်.ကိုဖွင်.ပြသည် ။ ပထမတစ်ပုဒ်နားထောင်လိုက်တာနှင်.ကျွန်တော်ကြက်သီးမွှေးညင်းတွေထသွားသည် ။
နောက်တစ်ပုဒ်ထပ်နားထောင်သည် ။ကောင်းသည် ။ နောက်တော. ခင်မောင်ညွန်.သီချင်းသွင်းပြီးပြန်လာတိုင်း သူ.သီချင်းခွေအကြမ်းကိုကျွန်တော်တို.နားထောင်ကြည်.သည် ။ကျွန်တော်ကတော.ကြိုက်နေပြီ ။ပရိသတ်ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ ။ မကြာမီစပယ်ဦးတေးသံသွင်းမှခွေထွက်လာသည်။၀င်းမင်းထွေးသည်သူ.တပည်.ကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်သည် ။ခင်မောင်ညွန်.မဟုတ်တော. ။ ချစ်ကောင်းတဲ. ။ကော်ဖီခါးခါး တဲ. ။ မည်ရွေ.မည်မျှအောင်မြင်ခဲ.သည်ကိုတော. ထိုခေတ်ကိုမီလိုက်သောအသက်လေးဆယ်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိကြမည်ဖြစ်သဖြင်.အထူးမပြောလိုတော.ပါ ။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ကော်ဖီမှာလျင်ပင် ချစ်ကောင်းတစ်ခွက်ဆိုတာတွေ ဖြစ်ကုန်သည် ။ ၀င်းမင်းထွေးကြောင်.ချစ်ကောင်းဆိုတာဖြစ်ခဲ.သလို ချစ်ကောင်းကြောင်. ၀င်းမင်းထွေးသည် ထိပ်တန်းတေးရေးဆရာဘ၀သို.ရောက်လာခဲ.ခြင်းဖြစ်သည် ။ကော်ဖီခါးခါးပေါက်ပြီးတော. ၀င်းမင်းထွေး ချစ်ကောင်းအတွဲ ဆက်တိုက်ထွက်လာသည်
နောက်တော.ချစ်ကောင်းသာမက ၀င်းမင်းထွေးသည် တူးတူး ၊ဟေမာနေ၀င်း၊ဇော်ဝင်းထွဋ်တို.အတွက်ပါ သီချင်းများရေးပေးသည် ။ ထူးအိမ်သင်အတွက်လည်း အရင်အတိုင်း ဆိုသောခွေကိုရေးခဲ.သည် ။